သက်ထား အလိုကျ – Grab Love Story
အကယ်ရွေ့သာ သင်သည် မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး သင်အင်မတန် မုန်းတီးရွံ့ရှာသော ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် လူသူမနီး ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်း အပေါ်မှာ အတူတကွ နေထိုင်ရမည် ဆိုပါက သင်မည်သို့ ရင်ဆိုင်မည်နည်း…..။
အကယ်ရွေ့သာ သင်သည် ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး သင်အင်မတန်မှ စက်ဆုပ်အော့နှလုးံနာလှသော မိန်းမတစ်ယောက်နှင့် လူသူမဲ့သော ကျွန်းတစ်ကျွန်း အပေါ်တွင် အတူတကွ ရှင်သန် နေထိုင်ရမည် ဆိုပါက သင်မည်သို့ ရင်ဆိုင်မည်နည်း….။
“ တောက်……..မတွေ့ချင်တဲ့လူကိုမှ လာတွေ့ရတယ်လို့…ကျက်သရေ တုံးလိုက်တာ..ထွီ..“
မော်တော်ကုန်းပတ်ပေါ်မှာ လူတစ်ယောက် သူမကို မြင်လိုက်တော့ ပထမ အံ့သြသွားသည်..။ ဒုတိယ မျက်မှောက်ကြီး ကြုတ်လို့ ဖျတ်ခနဲ..နောက်ဆုံးမှာ မျက်နှာလွှဲသွားတယ်…။
“ အောင်မာ…ငပြူးကများ လာပြဲရတယ်လို့ ရှိသေး..ဟွန်း…ထွီ…“
စိတ်ထဲကနေ ရိုင်းရိုင်းပျပျ ပဲတွေးပြီး ပျစ်ကနဲနေအောင်တံတွေး ထွေးပြပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခန်းထဲ ပဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့တော့တယ်..။
မော်တော်အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တဲ့အထိ ဒေါသအရှိန်က မပြေချင်..။ဘယ်ပြေလိမ့်မလဲ…။ဟို သကောင့်သား ခွေး…ကုလား..လူကဖြင့် လမ်းဘေးကွမ်းယာသည်..ကြည့်တော့ မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်..။ လုပ်တော့ မိန်းမလို မိန်းမရနဲ့ ကျက်သရေတုံး..။ဘယ်ဘဝက ရှေးရေစက်လဲ မသိတော့..။ဘယ်လိုမှ ..မျက်နှာကြောမတည့်..။မတည့်ဆို …မတည့်စရာ အကြောင်းတွေက လဲ ရှိနေတယ်လေ..။တကယ်ပါပဲ…ဒီလောက်တွေ့ခဲ့ဆုံခဲ့ တဲ့ အချိန်တို ခဏလေး အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိတောင် မုန်းတီးမိသလဲ ဆိုတာ..မသိတော့ဘူး..။ဥပဒေသာ မရှိပဲ နေကြည့်ပါလား ..သူမ အရင်ဆုံး သတ်မှာ အဲဒီ ဘိန်းစား..ကိုပဲ..။သူ့နာမည်က အပနား ဆိုလား…။ ကုလား…ကုလားဒိန်.. ရုပ်ကလဲ ဆိုး..စောက်ကျင့်ကလဲ မကောင်း…လမ်းဘေး ကွမ်းယာသည်..။ အဲ..လမ်းဘေး ဆိုတာက သူမ စာသင်တဲ့ တိုက်အောက်တည့်တည့်မှာ ဈေးရောင်းတဲ့ ကောင်…။
အခုလဲ တစ်လှေတဲစီး တစ်ခရီးထဲသွား ဆိုပေမဲ့ ခရီးသွားဖော် စိတ်ဓါတ် ဘယ်လိုမှ မွေးလို့မရ..။ ခုချက်ချင်းပဲ ပင်လယ်ထဲ ကျသေသွားပါစေ လို့တောင် ဆုတောင်းမိတယ်..။ တကယ်တော့ သူမ ဒီလောက် မရိုင်းတတ်..။ယဉ်ကျေးသည်..။သိမ်မွေ့သည်..။ပြီးတော့ ရှက်တတ် ကြောက်တတ် သေးတယ်..။ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အရှက်အကြောက်တွေ.၊ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့မှုတွေ အားလုံးပျောက်ကွယ် သွားအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့လူ..အဲဒီ..ကုလားကောင်..။ အင်း…မှတ်မိသေးတာ..ပေါ့…။
“ ကိုထွဋ်ကလဲ ကွယ်..အိမ်ကြီးကပဲ နောက်ခြောက်လလောက်ဆိုရင် ဖျက်တော့မဲ့ဟာကို အလကား စာချုပ်နေဦးမယ်..“
“မဟုတ်ဘူး…မသက်ထားရဲ့ ။ ဒီမှာ ကျောင်းသားရအောင်လို့.။ပြီးတော့ နောင် မသက်ထား ဘော်ဒါဖွင့်ရင် လဲ အဆင်ပြေတယ်လေ..။ဈေးက ဘယ်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ..။ နောက် စာချုပ်ပြည့်သွားတော့ ဟိုဘက်လမ်းမှာ ဆက်ငှားရင် ဒီက ၀ိတ် နဲ့ အဆင်ပိုပြေတာပေါ့..“
“ကိုထွဋ်က စီးပွားရေးသမား ဆိုတော့ ဒါ ဈေးတွက် တွက်လိုက်တာပေါ့..ဟုတ်လား..“
“ဒါပေါ့…ဒါပေါ့..။ ဒီခေတ်မှာ ဒီလောက်တွက်ထားမှ တော်ရုံ ကျတာ..“
“ဒါဖြင့် ..ဒီက..ကိုလဲ ဈေးတွက် တွက်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့တာပေါ့..ဟုတ်လား..“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း စိတ်တိုစွာ အော်တော့ ကိုထွဋ်ကျော် ပြုံးစစနဲ့ ပြန်ချော့သည်..။
“ကဲပါ…ရှေ့လဲ ကြည့်မောင်းပါ အုံး..။တော်ကြာ ဒီက အချစ်ကြီးနဲ့ လက်မထပ်လိုက်ရပဲ ဖြစ်နေဦးမယ်..“
“…ကွာ..စတဲ့ဟာကို ကလေးလေး ကျနေတာပဲ..နှုတ်ခမ်းစူထားပြီး ပြုံးတော့လဲ ဝက်ဖင်ကြီး ကျနေတာပဲ..“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကြာကြာ စိတ်မကောင်နိုင်ပါ..ရှားရှားပါးပါး အချိန်ကလေးမှာ စိတ်ကောင်ပြီး အချိန်မကုန်ချင်..။ကိုထွဋ်ကလဲ အချော့အမြှူ ကောင်းတယ်..မဟုတ်လား..။ အနှီ ကိုထွဋ်ဆိုသော ကိုထွဋ်ကျော်နှင့် ဒေါ်သက်ထားဝင်းက သမီးရီးစား မဟုတ်ကြပါ..။ချစ်လှချေရဲ့.ကြိုက်လှချေရဲ့ဆိုပြီး ခံစားကြေကွဲ ပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းလဲ မဟုတ်..။လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကမှ ကိုထွဋ်မိဘများက ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ ကျောင်းဆရာမ အင်္ဂလိပ်စာပြ ကျူတာမလေး ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကို လေ့လာ သဘောကျလို့ လူကြီးချင်း သဘောတူ တောင်းရမ်းကာ စေ့စပ်ပေးခဲ့သူ တစ်ယောက်..။
အသက်အရွယ်က သုံးဆယ်ကျော်..အပျိုကြီး မမ..။အဖိုဆိုလို့ ယင်ဖိုသန်းဖို့ ဝေးလို့ ရီးစားသနံတောင် မထားခဲ့ဘူးသူ..။ငယ်ငယ်က ကျောင်းစာ..။ကြီးလာတော့ စီးပွားရေး..။ဒါပဲ အာရုံ ရှိသူ…။ပညာ အရည်အချင်း က ပြောစရာမလိုတော့..။ငွေကြေး ချမ်းသာမှု ကလဲ သူမအဒေါ်နဲ့ ဘောက်ထော်မှာ ခြံနဲ့ တိုက်နဲ့ နေထိုင်နေတဲ့ အဒေါ်တစ်ခု တူမတစ်ခု ဘဝ..။ အလှအပ ကြည့်မလား..။ ခုခေတ် မင်းသမီးတွေ မော်ဒယ်လ်တွေ လွမ်းသွားမယ်..။ တကယ့် ခါးသေးရင်ချီ..ဖြူဖြူ တောင့်တောင့် မကြီး…။
ကိုထွဋ်ကျော် ကလဲ အသက် ၄၅ နှစ် ။ကျောက်လောက ၊အိမ်လောက..၊ ကားလောကမှာ မင်းမူနေတဲ့ ဝင်ဒါမီယာက ကျားတစ်ကောင်..။မိုးကုတ် အနွယ် ရှမ်းတရုတ် စပ်.။အမျိုးကောင်းသား သူဌေးပီပီ လက်စလက်နလေးတွေ ဇ..ကလေးတွေ ရှိတယ်..။သံယောဇဉ် အပြာ ကလေးတွေ ရှိတယ်..။ထားပါတော့လေ.. ကျောက်ကောင်းမှန်ရင် အနာတော့ ဘယ်ကင်းပါ့မလဲ..။ ကဲ..ဒီတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝက နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြ ၊ မြင်သူတိုင်း သွားရည်ကျရတဲ့ ဘဝ..။
အခုလဲ လွစ်စ်လမ်းက ကိုထွဋ်အသိ အဖိုးကြီး အိမ် အခန်းလာငှါးတာ..။ ခြောက်လစာ အပြတ် အခန်းငှားပေးဖို့ လိုက်လာတာ..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်းကိုယ်တိုင်က ငယ်ငယ်ထဲက အဒေါ်အပျိုကြီးနဲ့ပဲ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်ကျောင်းနေလာခဲ့တာဆိုတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ကိုချည်းပဲ မှီခိုပြီး အားကိုးမနေချင်..။ဘာလုပ်မှာလဲ အားကိုးချင်မှတော့ အစောကြီးကထဲက လင်ယူမှာပေါ့..။လင်…ဘာလုပ်ဖို့လဲ…။အဒေါ်စကား မပယ်ရှားချင်လို့သာ ခေါင်းငြီမ့်ခဲ့တာ..။အချိန်မရွေး ခေါင်းခါ နိုင်တယ်..။ အဒေါ်ကလဲ အတင်းတော့ မတိုက်တွန်းပါ..။ ချစ်လို့လဲ မဟုတ်..။အချစ်ဆိုတာ..ဘာလဲ..။နားမလည်..။ဘာပဲပြောပြော သူက ယောက်ျား ဆိုတော့ ဦးဆောင်ဦး ရွက် ပြုချင်မှာပေါ့…။ ဒါ..သဘာဝ ကျပါတယ်လေ..။
အဲဒီနေ့ ကအိမ်ရှင် အဖိုးကြီးနဲ့ တော်တော်ကြာကြာ စကားပြော၊ စာလဲချုပ်၊ ငွေလဲ အပြေ ပေးပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်..။တိုက်ကတော့ နှစ်ထပ်အိမ်ပါ။ သစ်သားကြမ်းခင်းနဲ့ ရှေးဟောင်းပုံစံ အုတ်ပတ်ကား ခပ်ညံ့ညံ့ တက်ထားတာပါ..။တစ်ချို့ နေရာတွေက စိုလို့ ရွှဲလို့ စုတ်ပြတ်လို့ နေချင်စရာ တကွက်မှ မရှိဘူး..။ အေးလေ.. ခြောက်လပဲ ဆိုတော့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း အကောင်းအဆိုး တစ်ခွန်းမှ မပြောတော့ပဲ ပြန်လာခဲ့တယ်..။ အင်းဘာလိုလိုနဲ့ ဘော်ဒါ ကိစ်စတောင် နောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်..။ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း ဒေါက်တာမာလာက ပြင်ဦးလွင်မှာလေ..။အဲဒါ သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကိုယ်ကဒီမှာ ကျောင်းသားစု။ စာပြပြီး စီမံခန့်ခွဲ ။ အဲ..ဟိုကိုတော့စာမေးပွဲဖြေဖို့ ခြောက်လ အလိုလောက်မှာ စခန်းသွင်းဖို့ လွှတ်..။ ဟိုမှာ သူငယ်ချင်းက အုပ်ချုပ်..။ အဲဒီလို ကြံထားတာလေ..။နဲနဲ တော့ နောက်ကျသွားပြီ..။ အင်းလေ.. နောက်နှစ်ပေါ့..။
နောက်အပတ် စနေနေ့ မှာ သင်တန်းစဖွင့်ဖြစ်တယ်..။ လမ်းဘေးက ကားပါ့ကင်နေရာမှာ ကားကိုရပ်ပြီး တိုက်ရှိရာကို လာခဲ့တယ်..။ အဲဒီမှာ..စတွေ့တာပဲ..။ ကွမ်းယာဆိုင်လေး..။ကွမ်းယာ ၊ဆေးလိပ်၊ အချိုအချဉ်ကလေးတွေက စလို့ တိုလီမိုလီဟာလေးတွေ အစုံ ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေး..။ကျူရှင်သင်မဲ့ တိုက်အောက်တည့်တည့်မှာ အခန့်သား နေရာယူလို့..။သြော်..သူက..ဟိုးအရင်ထဲက ရှိခဲ့တာထင်ပါရဲ့လို့ တွေးပြီး တိုက်ပေါ်တက်မယ် အလုပ်..။ကွမ်းယာဆိုင်က အကောင်..ကုလားစုတ်..ပေါ့.။
အစုတ်ပလုပ် ငတိက သူမကို စူးစူးရဲရဲ ကြီး ကြည်တယ်..။ကြည့်တာမှ ပြူးပြူးပြဲပြဲ ကြီး..။ တကယ် ကြက်သီးထစရာ..။ရင်ဖို စရာ..။ ပြီးတော့ ..ဒေါသ ထွက်စရာ..။ ဘုကြည့်တစ်ချက် ပြန်ကြည့်ပေးပြီး ဆံပင်ရှည်တွေကို ရမ်းခါရင်း ကိုယ်စာသင်မဲ့ နေရာကို တက်လာတာပေါ့..။ အောင်မာ…ကုလား..အစုတ်ပလုပ်ကောင်က…မပြီးသေးဘူး…။နောက်ကနေ နှမချင်း မစာနာ လိုက်ကြည့်နေ လိုက်တာများ..သက်ထားရဲ့ ထမိန်ထဲ သူ့မျက်လုံးကြီးတွေ..ထိုးဖောက် ဝင်လာတော့မတတ်ပဲ..။ဒါနဲ့ သက်ထား ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ ပြန်ငဲ့စောင်း ကြည့်တာတွေ့တော့..မှ ငနဲသား..ကမျက်နှာလွှဲသွားတယ်..။ မလွှဲချင် လွှဲချင်နဲ့ ပေါ့..။
လှေကားကို ဝုန်းဒိုင်းကျဲပြီး တက်လာတာတောင် ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း စွင့်စွင့်ကားကား တင်သားကြီးတွေကို အားမနာစတမ်း လိုက် ရှိုး နေတဲ့ ကုလားမျက်လုံးတွေကို ဒေါ်သက်ထားဝင်း အာရုံထဲက တော်ရုံနဲ့ မထွက်..။ ကိုယ်လှတာတော့ ကိုယ်သိတာပေါ့..။အဲ..အဲဒီတင်သား..တင်ကြီး..ဖင်ကြီးတွေက ..တင်းရင်းပြီး အိဖြိုးနေပုံက ရေအိုးကြီး တစ်လုံးကို ခါးအောက်ပိုင်းမှာ ကော်နဲ့ ဆက်ကပ်ထားသလို ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကိုယ်တိုင်လဲ ကိုယ့်ဟာကြီးတွေအတွက် ဂုဏ်ယူမိတယ်လေ…။အဲဒီလို…ကြွနေ မောက်နေအောင်လဲ လေ့ကျင့်ခဲ့ရသေးတာ ကိုး…။မယ်ဘွဲ့တွေ..လှယဉ်ကျေးမယ်တွေ..၊ မစ်.စ် ဘာညာတွေတစ်ခါမှ မရဘူးခဲ့..။အဲ ..မရဖူး ဘူးဆိုတာထက်..စတိတ်စင်ပေါ်မှာ ကိုယ့်ဟာကြီးတွေကို ထုတ်ပြပြီး ဆုလေးတစ်ဆုလောက်ပဲ ရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်တန်ပါ့မလဲ..နော်..။ နို့မို့ဆိုလို့ကတော့…ဟင်း.ဟင်း..ဒီတင်သား ၃၈ လက်မ ကြီးတွေက ဒိုင်လူကြိးတွေ။ ပရိတ်သတ်တွေဆီက အမှတ်တွေကို ခြွေယူနိုင်မဲ့ လက်နက်တွေပေါ့..။
တင်ပဲလား….မဟုတ်သေး…တင်ကျတော့ ၃၈၊ ခါးကျတော့ ၂၅ ၊ ဘယ်လောက်သွယ်ပြီး ဘယ်လောက်ကျဉ်းသလဲ..။ဒေါ်သက်ထားဝင်းရဲ့ လက်နဲ့ ထွာဆိုင် သာသာပဲ ရှိတယ်..။အတိပဲ..။မပိုဘူး..မလိုဘူး..။ လက်ပြတ်အကျီ င်္တွေ ပြောင် ထမိန်တွေ ထည်လဲ ဝတ်ခဲ့တယ်..။ဝတ်တတ် စားတတ်တော့ ကြည့်ကြရတဲ့ ကောင်တွေရဲ့ ရမက်စိတ်ရိုင်း တွေကို ချက်ချင်းနိုးလာစေတဲ့ အဆက်အပေါက် ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် အသိ..။
မဟာဆန်တဲ့ မျက်နှာ၊ အမို့အစွင့် အရှိုက် အဟိုက် အထစ်အဖောင်းတွေက သူ့နေရာနဲ့သူဆိုတော့ အကောင်တွေ နှာထချင်တာ မဆန်း။ သူမကိုယ်တိုင် စိတ်အလိုကို မလွန်ဆန်နိုင်သေး..။ဘာလုပ်သလဲ..စိတ်ဆာလာလျင် အရမ်းပြင်းပြလာတဲ့ နေ့တွေမှာ အောက်ခံဘောင်းဘီ သားရေကြိုးကို တင်းနေအောင်ဝတ်ပြီး ဘောင်းဘီကြိုးရာကြီး ထင်းနေအောင် လုပ်ပြတာကလွဲပြီး ဘာမှ မလုပ်ရဲရှာ..။ကိုယ်က အရှက်သည်းတတ်တဲ့ မိန်းမသားမို့လား..။
ပြောခဲ့သလို စာဖွဲ့လို့ မမှီအောင်ကို ချောတယ်လေ..။အဲဒီ..အလှအတွက်..မာနကလေးကလဲ ရှိသေးတယ်..။ယောက်ျားတွေလို ပိုက်ဆံပေးပြီး ပျော်ပါးလို့ရတာလဲ မဟုတ်..။ ပြီးတော့ကျောင်းဆရာမ..။ဆယ်တန်းအင်္ဂလိပ်စာ ကျူရှင်ဆရာမ..။နည်းပြပေါက်စ။နဲနဲနောနော ဂုဏ်ပုဒ်တွေ မဟုတ်..။ဒါတွေက်ို အခု ကုလားတစ်ကောင်က ဖျက်ဆီးနေပြီလေ..။စားတော့ဝါးတော့မတတ် ဏှာအကြည့်..။စူးရှတယ်၊အားပြင်းတယ်၊ကျားတစ်ကောင် သားကောင်ချောင်းသလို အကြည့်..။ဒေါ်သက်ထားဝင်း စိတ်လဲ လှုပ်ရှားမိတယ်..။ဒေါသလဲ ဖြစ်မိတယ်..။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ။ စုတ်ချွန်းချွန်း ကုလားစုတ်ကောင်ကို မမြင်ချင်ပဲ မုန်းမိတယ်..။တခြားကောင်တွေလဲ ကြည့်တာပါပဲ..။တခါတလေများ အိမ်က ကားပျက်လို့လိုင်းကားတောင် တိုးမစီးရဲဘူး..။ကားပေါ်မှာ ဝိုင်းထောက်လိုက်ကြတာ..။တချို့ ခပ်ရဲရဲ ကောင်တွေဆိုရင် မတော်တဆလိုလိုနဲ့ ဖင်အိုးကြီးတွေကိုပါ ပွတ်ပေးညှစ်ပေးချင်ကြတာ..။အဲဒီတုံးကတောင် ဒီလောက်ဒေါသ မဖြစ်ခဲ့..။အခုတော့ ဒီကောင်နဲ့မှ မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ဒေါသဖြစ်ရတယ်..။
သင်တန်းကလဲ အစမို့လို့လားမသိ.။စာသင်ရာမှာ စာထဲ အာရုံမရောက်နိုင်.။အခုချက်ချင်းပဲ တက်ခွတော့မဲ့ မျက်လုံးစူးစူးကြီးတွေကို တွေးမိပြီး အယောင်ယောင်အမှားမှား တွေကိုဖြစ်လို့..။ ဝင်းဝါနေတဲ့ မျက်နှာလှလှကလေးကလဲ ရှက်သွေးတွေကြောင့်ရဲရဲနီပြိး စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်လိုက်၊ ဒေါသထွက်လိုက်နဲ့တစ်ယောက်ထဲ နေမထိ ထိုင်မသာဖြစ်နေရတယ်..။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်သက်ထားဝင်း စစ်ဆင်ရေး တစ်ခုစတယ်..။ကားကိုရပ်ပြီးတာနဲ့ ကုလားကိုမြင်ရင် အရင်ဆုံးစူးစိုက်ကြည့်တယ်..။အဲသလိုများဆိုတော့လဲ..သနားစရာတောင် ကောင်းသေးတော့..။သူမစိုက်ကြည့်တာ ခံရတဲ့ ကုလားခမျာမှာ နေစရာတောင်မရှိဘူး..။မျက်လွှာကြီးချလို့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ပုံစံနဲ့..။ ဒီတော့လဲ မိန်းမသားပီပီ ကျေနပ်မိပြန်ရော..။ အင်း..ဒါပေမဲ့ လှေကားကို စတက်ပြီဆိုတာနဲ့ နိမ့်တုံမြင့်တုံ တင်ပဆုံသားကြီးတွေရဲ့ စည်းချက်လှလှကို ငနဲသားကုလား နောက်ကနေ ရှုစားပြန်လေရော..။ ဒီတော့လဲ ဒေါသထပ် ထွက်ရပြန်ရော..။
အဲဒါနဲ့ပဲ နှစ်ယောက်သား သံသရာလည်နေရောပဲ..။ဒီထက်လဲ မပိုဘူး..။ နောက်ရက်တွေကျတော့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ပိုပြီး အရွဲ့တိုက်တဲ့သဘောနဲ့ တင်သားတွေကို ပိုပြီး မောက်နေအောင် မို့နေအောင် ဝတ်စားပြတယ်..။ထမိန်ပျော့ပျော့တွေ..၊ပြောင်သားတွေ၊ ဝတ်ပြတယ်..။ ပိုပြီးတော့လဲ တင်သားကြီးတွေ ရမ်းခါနေအောင် လျှောက်ပြတယ်..။ အဝတ်အစားကလဲ လှ၊ လူကလဲ ကြွနဲ့..ဒီကုလားရဲ့ ရင်ကို မေးမကြည့်ပဲနဲ့ တွေကြည့်ရုံနဲ့ ဗလောက်ဆူအောင်ကို လုပ်ပစ်လိုက်တယ်..။မှတ်ကရောပဲ..။ ဒီလောက်တောင် အကြောထချင် သန်ချင်တဲ့ကောင်..။အဲဒီမှာ ရင်ခုန်ရင်း ရူးပေရော့…။စားမဝင် အိပ်မပျော် ဖြစ်ပေရော့..။ ယောက်ျားတွေ အာသာဖြေတဲ့နည်းမျိုးနဲ့ပဲ လုံးကြီးပေါက်လှ ဆရာမ..အပျိုမကြီးကို မှန်းပြီးတော့ လွမ်းပေတော့…။ဒီတစ်သက်တော့ ရလိမ့်မယ် မထင်နဲ့…။
အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ မိန်းမသားတစ်ယောက်မို့ ယောက်ျားတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ဒေါ်သက်ထားဝင်း နည်းနည်းပါးပါးတော့ အကဲခတ်တတ်တယ်..။ မရလို့သာ..ရလို့ကတော့ ဘယ်လောက်များ….ဟင်း..တွေးတောင်မတွေးရဲ…။ အဲ ..တခါတလေတော့လဲ..သာယာမိတယ်..။ အဲ..ဟိုဟာဒီဟာတွေ မလုပ်ချင်..။ကြောက်လဲ ကြောက်တယ်..။ အသဲလဲ ယားမိတယ်..။ ငယ်ငယ်တုံးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဗွီဒီယိုအပြာကား ခိုးကြည်ကပြီး စိတ်ထဲမှာ ကတုန်ကယင်ကြီးနဲ့ မာစတာဗေးရှင်း လုပ်လိုက်မိတယ်..။ အဲဒီ တစ်ခါကိုပဲ လူသိသွားမှာ စိုးရိမ်မိပြီး နောက်ထပ်မလုပ်ရဲတော့ဘူး…။
မိန်းမဆိုတာကလဲ ခက်တယ်လေ..။ကိုယ်ဘယ်လောက်တောင် ဘာတွေဖြစ်နေဦး ရင်ထဲမှာပဲလေ..။အပြင်ကို ထုတ်ပြလို့ ရတာမှ မဟုတ်တာ..။ ထိန်းသိမ်းရမဲ့ ဂုဏ်တွေ၊ ထားရှိရမဲ့ အရှက်တရား အကြောက်တရားတွေ ဟာ…ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး..။အသေချာသိတာက မိန်းမသားဆိုတာက ခက်တယ်လေ..ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့….။
ကောင်မလေးက ရှက်ရွံ့ဟန်ဖြင့် ခေါင်းငုံ့သွားတယ်..။ပြောရအခက် မပြောရအခက် ဝေခွဲမရဟန်နဲ့ စဉ်းစားနေတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း အားပေးသလိုနဲ့ တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီး….
“သြော်…သမီးရယ်…ဘာကိုကြောက်နေ ရှက်နေရတာလဲ..သမီးပြောမှ တီချယ်က လိုက်ရှင်းပေးလို့ရမှာပေါ့..။ကဲ..ပြော..သမီးကို ဘယ်သူက စာလိုက်ပေးတာလဲ..စကားလိုက်ပြောတာလဲ..“
“ဘယ် ဦးလေးကြီးလဲ သမီးရဲ့…“
“ဟိုလေ..အောက်ထပ်က.. ကွမ်းယာသည် ဦးကုလားကြီး..“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရင်မှာ ဒိန်းခနဲ ဖြစ်သွားတယ်..။ ဒီ စောက်ကောင် ဘာဂြိုဟ်မွှေပြန်ပြီလဲ လို့..။
“ ပြောစမ်း သမီး ..ဘာဖြစ်သလဲ..အဲဒီတော့..“
“ဒီ…ဒီလိုပါ..တီချယ်..အဲဒီ ဦးကုလားကြီးက သ..သမီး..လာတိုင်း..လိုက် လိုက်ကြည့်နေလို့..“
“ သြော်..ဒါများ သမီးရယ်..ကြည့်တာပဲကွယ်..ပဲ့ပါသွားတာမှတ်လို့..“
“ မဟုတ်ဘူး..မဟုတ်ဘူး..တီချယ်..သူက သမီး ..ဖ..ဖင်တွေကို လိုက်ကြည့်တာ တီချယ်..ရဲ့..“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း အသံကျယ်သွားတယ်..။တစ်ဖက်ခန်းမှ စာကျက်နေတဲ့ တပည့်လေးတွေ ကြားမှာစိုးသဖြင့် ကပျာကသီ ဒေါသပြန်ထိန်းလိုက်ရတယ်..။
“ဟုတ်…ဟုတ်တယ်..တီချယ်ရဲ့ သမီးလာတိုင်း လာတိုင်း သမီး ဖင်ကိုမှ ရွေးကြည့်တာ…သမီး ရှက်လဲရှက်တယ်..။ကြောက်လဲကြောက်တယ်…တီချယ်…“
“ပြီးတော့ မကြားတကြားလဲ ပြောသေးတယ်..ဒီကောင်မလေးက တောင့်တော့ တောင့်သား…အဲ ဒါပေမဲ့ ဆရာမကိုတော့ မမှီဘူး…တဲ့..“
“သွားခေါ်စမ်း..သမီး..။ သမီး အခန်းထဲ ဝင်ပြီး စာကျက်နေတော့…ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ကို လွှတ်ပြီး ဆရာမ ခေါ်နေတယ်လို့ ပြော…ကဲ..သွားခေါ်ခိုင်းလိုက် ..သမီး..“
ခဏကြာတော့ တပည့်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကုလား ရောက်လာတယ်..။တပည့်လေးကို စာပြန်ကျက်ခိုင်းလိုက်တယ်…။
“ကဲ…တံခါး ပိတ်လိုက်ပြီး ပြသနာ ရှင်းကြရအောင်..“
ကုလား နဝေတိမ်တောင်ဖြင့် တံခါးသွားပိတ်ပြီး ခုံမှာထိုင်သည်…။
“ရှင် အခုမှ ရူးချင်ယောင် ဆောင်မနေပါနဲ့..ရှင်ပြောလိုက်တာ..ရှင်သိမှာပေါ့..“
“အာ…မဟုတ်ဘူး…ဆရာမား….ချန်တော်…အဲ..ကျုပ်..ဆရာမား ခိုင်းစရာရှိတယ် ထင်လို့…“
“ဘာမှ ခိုင်းဖို့မလိုဘူး..နင့်လိုအကောင်မျိုးကို..နင် ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေးနဲ့ ငါ့တပည့်မလေးကို ဘာမဟုတ်မဟတ်တွေ ပြောလိုက်တာလဲ…ကဲ..ပြောစမ်း….“
ကုလား စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ခေါင်းရှုပ်သွားပုံ ရတယ်..။ဟုတ်တယ်လေ….ပြသနာဆိုပြီးတော့ ဘာမှန်းညာမှန်း ရေရေရာရာ မသိရပဲ အသားလွတ် ဆူခံနေရတာ..ကိုး…..။
တကယ်တမ်းတော့ ပြောမထွက်တော့…။ အပျိုမကြီးပီပီ အရှက်သည်းနေတယ်…။သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ဦးနဲ့ ဒီ ဖင်တွေရင်တွေ အကြောင်းကို ဘယ်မိန်းမကများ ပြောထွက်ဝံ့ပါ့မလဲ…။ဒါပေမဲ့…အားတင်းပြီး …
“နင်…နင် ငါ့တပည့်မလေးကို ဖင်…ဖင်ကောင်းတယ်လို့ ပြောတယ်ဆို…“
ရှက်ရှက်နဲ့ မပြောမဖြစ် ပြောရတော့ ကုလား စပ်ဖြဲဖြဲ ဖြစ်သွားတယ်…ဒါပေမဲ့…အကောင်စုတ်…ကုလား က ဝန်မခံဘူး…..ငြင်းတာပေါ့….။
“အေး…နင်ကယောက်ျားဖြစ်ပြီး ကလိမ်ကကျစ် ကျချင်တယ်…ဒါတွေထားပါတော့..ကဲ..ဒီမှာ ငါ တိုတိုပဲ ပြောမယ်…နောက်တစ်ခါ နင် ဒီ့ထက်လွန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ငါရဲနဲ့ပဲ စကားပြောခိုင်းမယ်…ကဲ..နင်သွားတော့…“
ဟုတ်ကဲ့ ဆိုပြီး ကုလား တစ်ချက်မော့ပြီးတော့မှ ပြန်ထွက်သွားတယ်…။ ဟွန်း…စောက်ကောင်..အပိုးကို မကျိုးဘူး..။ အဲ…အဲ…အဲတော့…….ဘုရားရေ..။ သွားပြီ..ဒါကြောင့် သူကြည့်တာ ငါ့မျက်နှာကို မကြည့်ပဲ ရင်ဘတ်လောက်ရောက်နေတာ ထူးခြားပါတယ်လို့ ထင်နေတာ…။ လက်စသတ်တော့ ဘယ်အချိန်ထဲက ဘယ်လောက်..ဟိုက်နေလဲ မသိ..လည်ဟိုက် ဘလောက်အကီင်္ျက
အတော်ကလေး ဟိုက်ကျနေပြီး ဝင်းမို့နေတဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာကို တစ်ဝက်တပျက်စီ ဝင်းပနေစေတယ်။ တောက်… စောက်နှာကောင်.. ဒီလောက်ပြောနေတာတောင် နို့ကိုကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်သွားသေးတယ်..။ ကသိကအောက်လဲဖြစ် ရှက်လဲရှက်နဲ့မို့ မလုံမခြုံဟန်နဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရင်သားအစုံကို လက်များနဲ့ ဖုံးကွယ်လိုက်မိတယ်…။
ပြီးသွားပြီဟု ထင်ပါသလား….။မပြီးသေးပါ..။ ကုလားငြိမ်ကျသွားပြီလို့ ထင်ထားခဲ့တာ နောက်အပတ်ကျတော့ ကုလားဆိုင်မဖွင့်..။ သုံးလလောက် သူများဖင်ကြီးတွေကို စားတော့ဝါးတော့မတတ် နေ့စဉ် စိုက်ကြည့်နေလာခဲ့ရာကနေ ရုတ်တရက် ပျောက်သွားတော့ ရင်ထဲမှာ ဟာခနဲ တစ်ချက်တော့ဖြစ်သွားတယ်…။ ဒါပေမဲ့ ခဏပါပဲ…။ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ စာသင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရတော့လဲ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားရပါတယ်..။ အဲ..ဒါပေမဲ့ ညနေကျတော့ သူ့ရဲ့ ဇ ကိုတွေ့ရတော့တာပါပဲ…။ပြန်မယ်လုပ်တော့ ကားဘီးမှာ လေမရှိတော့ဘူး..။ ဒေါသဖြစ်လိုက်တာမှ ပြောမပြတတ်အောင်ပဲ..။သူကလဲ ဆိုင်တောင်မဖွင့်ဘူး ဆိုတော့ သူလုပ်တာပါလို့ စွပ်စွဲဖို့ကလဲ အခက်သား..။ အဲဒီလို နောက်မဲ့ ပြောင်မဲ့ အသိလဲ ဒေါ်သက်ထားဝင်း မှာ မရှိပါ..။ သူကတော့ အပျိုတင်းပြည့်မကြီးတစ်ယောက် ဒေါသနဲ့ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေတာကို အထဲကနေကြည့်ပြီး ဟားတိုက်နေမှာပဲ..။ တွေ့ဦးမှာပေါ့..ကုလားရယ်..။
နောက်နေ့ကျတော့ ချက်ချင်းပဲ ကလဲ့စား ချေဖြစ်တယ်..။ ကားပါကင်ထိုးရင်း နေရာမလွတ်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဘေးနားက ရေအိုင်ကို ဖြတ်မောင်းလိုက်တယ်..။ သွားရော..။ဗြန်းခနဲပဲ သူ့အဝတ်အစားတွေ အကုန် ရွှံ့ဗွက်တွေ ရေတွေ မြင်မကောင်းအောင် ပေပွကုန်တယ်..။ကြိတ်ပြီး ကျေနပ်သွားပေမဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း မှင်သေသေနဲ့ အားနာသလို ဟန်လုပ်ပြီး ..
မကြည်ဘူးလေ…သံပြတ်ကြီးနဲ့ပြောပြီး ဟိုဘက်လှည့်သွားတယ်..။ ဝမ်းသာလိုက်တာ..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း အပျိုမလေး တစ်ယောက်လို လေကလေးချွန် သီချင်းကလေး တိုးတိုးညည်းပြီး တိုက်ပေါ်တက်သွားတယ်..။
အဲ..သူ့ရဲ့ ကလဲ့စားကို အဲဒီညနေစောင်းမှာပဲ ချက်ချင်းပြန်ကြုံရတော့တာပဲ..။ စာသင်ပြီးလို့ ကျောင်းသားတွေအားလုံး ပြန်ကုန်တဲ့အချိန်..တံခါးတွေပိတ် အားလုံးသိမ်းဆည်းနေရတာနဲ့ အချိန် နဲနဲ ကြာသွားတယ်..။ အခန်းတံခါးကို ချက်ထိုး သော့ခတ်ပြီး လှည့်အထွက် “ဗျိ“ ခနဲပဲ..။ ဘာတွေပါလိမ့်..။ရုတ်တရက် စဉ်းစားမရ။ရွှံ့တွေ ဗွက်တွေက ဒီအပေါ်ရောက်အောင် ဘယ်သူများ သယ်လာပါလိမ့်..။ အသာကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ …ထွီ..ဝေါ့….ခွေးချေးတွေ…။ နံလိုက်တာ…လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အပုံလိုက်ကြီး..။ ယောင်ပြီး ထမိန်ကို သုတ်မိတော့ ထမိန်စမှာ ပေကပ် ကုန်တယ်..။ အံကြိတ်ပြီး အောက်ကို ရန်တွေ့ဖို့ ပြေးဆင်းသွားတော့ ငနဲသား ဆိုင်သိမ်းသွားပြီ..။ နံလိုက်တာ လွန်ပါရော…ရွံတတ်တဲ့ အပျိုတင်းပြည့်မကြီး အိမ်ရောက်တော့ ထမင်းတောင် ကောင်းကောင်း မစားနိုင်ရှာ..။ တွေ့မယ်..တွေ့မယ်..ခွေးသူတောင်းစား ကုလား..။
ကလဲ့စားမချေဖြစ်တော့ပါ..။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က ဒေါ်သက်ထားဝင်း သင်တန်းမဖွင့်ဖြစ်..။ ကိုထွဋ်လာခေါ်လို့ သူနဲလက်ထပ်ပြီးရင် နေမဲ့အိမ်ကလေးဆီ သွားခဲ့ကြတယ်..။ဝင်ဒါမီယာထဲမှာ..။ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်လေးက ညနေစောင်းအခါမို့ ပိုလို့ တိတ်ဆိတ်နေတယ်..။ခဏတဖြုတ် ခြံနဲ့အိမ်ကို လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ ပျင်းလာတယ်..။ပြန်လဲ ပြန်ချင်လာမိတယ်..။
“နေပါဦး..မသက်ထားရယ်..ရောက်တုံးရောက်ခိုက် အအေးလေးဘာလေး သောက်ပြီး စကားပြောရအောင်..“
ကိုထွဋ်ကဖိတ်နေတာနဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း အိမ်ထဲ ရောက်ခဲ့ရတယ်..။
“ကဲ…ဒီမှာခဏထိုင်ဦး..ကိုထွဋ် အအေးသွားယူလိုက်ဦးမယ်..ပျင်းရင် အဲဒီမှာ စာအုပ်တွေ ဖတ်နေပေါ့..“
ပြောပြောဆိုဆို ကိုထွဋ် နောက်ဖေးခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်..။ အေးလေ..နာရီဝက်လောက် သူစိတ်ကျေနပ်အောင်နေပြီး ပြန်တာပေါ့..ဟုဆုံးဖြတ်ရင်း ဒေါ်သက်ထားဝင်း စားပွဲပေါ်မှ စာအုပ်များကို ယူကြည့်လိုက်တယ်…။ အို…လား..လား …မကြည့်ဝံ့စရာတွေပါလား..။ ဟိုပုံတွေလေ…ဘိုထီးနဲ့ ဘိုမ အမျိုးမျိုး စပ်ယှက်နေတဲ့ ပုံတွေ…မကြည့်ရဲတာကြည့်ရဲတာ အသာထား..။ လောလောဆယ်မှာတော့ အပျိုတင်းပြည့်မကြီး စာအုပ်ပြန်ချထားလိုက်ဖို့ စိတ်မရှိ..။ပုံတွေကလဲ ခပ်ဆန်းဆန်းတွေကိုး..။ မျက်နှာဖြူမ တစ်ယောက်ထဲကို ယောက်ျား လေးယောက်လောက် ဝိုင်းပြီး သမနေတာလဲ ပါရဲ့..။ယုတ်စွအဆုံး ခွေးတောင်မချန်ဘူး..။ အယ်လ်ဇေးရှင်း ခွေးထီးကြီးက ဘိုမလေးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် တက်ခွလုပ်နေတာရော ကပ်ပလီကြီးတစ်ကောင်နဲ့ ဂျပန်မလေးနှစ်ယောက် သောင်းကြမ်းနေတာရော …ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ မောလာတယ်..။ ရင်တွေပူပြီး အာခေါင်တွေ ခြောက်လာတယ်..။ ရင်ဖိုပြီး စိတ်တွေကလဲ အရမ်းလှုပ်ရှားလာတယ်..။ နှလုံးခုံသံ တဒုတ်ဒုတ်ကိုတောင် ပြန်ကြားလာသလိုပဲ..။
ကိုထွဋ် ပြန်ရောက်ခါနီးလို့ စာအုပ်ကိုပြန်ချထားလိုက်ရပေမဲ့ မျက်ဝန်းထဲမှာ ပုံတွေက မထွက် ။ လိုးပုံ လိုးကွက်တွေက ဦးနှောက်ထဲကို သံမှိုစွဲလိုက်သလို..။
“စောင့်နေရတာ ပျင်းနေပြီလား..။ ရော့..ဒီမှာ coke..စပ်လာတယ်..တစ်ယောက်တစ်ခွက်ပဲ..“
ရင်ပူနေတာတွေ ပျောက်သွားအောင်လို့ အလောတကြီးမော့သောက်လိုက်တော့ ခါးသက်သက် အရသာက လျှာဖျားကနေ ရင်ထဲအထိ ပူဆင်းသွားတယ်..။
“ကိုထွဋ် အအေးကလဲ ခါးလိုက်တာ..“
“စိတ်ထင်လို့ပါ သက်ထားရဲ့ မခါးပါဘူး..။ ဒါနဲ့ သက်ထား ဟိုစာအုပ်တွေ ဖွင့်ဖတ်သေးလား..“
“သြော်…သက်ထားရယ်..ကိုထွဋ်မှာက မိန်းမ မှမရှိသေးတာ.. ဒီလိုစာအုပ်မျိုးလေးတွေနဲ့ပဲ စိတ်ဖြေနေရတာ..ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက် သက်ထားကိုယ်လုံးကြီး မြင်ယောင်လိုက်..“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရင်ထဲမှာ ဖိန်းခနဲ ရှိန်းခနဲ ဖြစ်ပြီး ရှက်သွေးတဖြာဖြာနဲ့ လက်ကျန်အအေးကို ကုန်အောင် မော့သောက်လိုက်တယ်..။
“သက်ထားကို မွှေးမွှေး ပေးချင်တယ်..“
“တကယ်ပါ..သက်ထားရဲ့..ကိုထွဋ်ကို နမ်းခွင့်လေးတော့ ပေးပါလား….“
ကိုထွဋ်ကျော်က မိန်းမကြောတော့ နပ်ပုံရတယ်..။ ဘာပြီးရင် ဘာလာမယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့ဟန်..။ အခုလဲ အပျိုမကြီး ကို အအေးခွက်ထဲ အရက်တွေရော တိုက်လိုက်တယ်..။ အရက်ရှိန်နဲ့ ရီတီတီ ဖြစ်ပြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်း ခေါင်းမထောင်နိုင်တော့..။ ဒီတော့မှ အပိုင်ချည်တော့တယ်…။
“ခေါင်းမူးနေရင် ကိုယ့်ကိုမှီထားပါလား သက်ထားရဲ့..“
မှီလာတဲ့ ခေါင်းကလေးကို ကိုင်ပြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်း နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးကြီးကို နမ်းစုတ်လိုက်တယ်..။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရင်ကလေးကော့ပြီး လက်က မသိမသာ ပြန်တွန်းတယ်..။ဒါပေမဲ့ ရီဝေယစ်မူးနေတဲ့ အရှိန်က တွန်းအားကို လျော့စေတယ်..။ ကိုထဋ်လက်တစ်ဖက်က ထမိန်စကပ်ထဲ လက်လျှိုသွင်းပြီး လတ်ဆတ်လှတဲ့ မိုးခိုသားလေးတွေကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်..။
အလိုမတူဟန် ငြင်းဆန်သံလေးက မူနွဲ့နွဲ့..။ တစ်သက်လုံး ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ နေလာခဲ့သော ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အဖုတ်နှိုက်ခံရတယ်..။ ခေါင်းတွေကလဲ မူးနေတယ်..။လူကလဲ ထူးနေတယ်..။ ရမက်သွေးတွေကလဲ နွေးလာပြီထင့်..။အသိစိတ်တွေပင် မကပ်ချင်တော့..။ တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ ကွာဝေးသွားသလိုလို..။ ရှက်သွေးတွေလဲမွှန်..။ အရသာလဲ ရှိနေ..ခံစားမှု မျိုးစုံနဲ့ ကိုထွဋ်ကို ပြန်ဖက်ထားမိတယ်…။
“သက်ထား ခေါင်းမူးနေတာ ခဏလှဲလိုက်မှ သက်သာသွားမှာပေါ့..“
မသွားချင်..။အိပ်ခန်းထဲ ရောက်ရင် ငါတော့ ဘဝပျက်မှာပဲ ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကလေးက ငြင်းချက်ထုတ်ခိုင်း နေတယ်..။ ငြင်းဆန်ရင်း ရုန်းကန်ရင်း နဲ့ ဘယ်အချိန်က ကုတင်ပေါ်ရောက်သွားသလဲ မမှတ်မိတော့….။ သတိတစ်ချက် ဝင်လာတော့ အောက်ပိုင်းမှာ ထမိန်က မရှိတော့.ချေ..။ အင်းကျီတွေပါ ကိုထွဋ်က ချွတ်ဖို့ကြံတယ်…။
“ဟင့်အင်းကွယ်…ကိုထွဋ် အကျီ င်္တွေတော့ မချွတ်ပါရစေနဲ့နော်..“
ပေါင်တံကြီးများကို ဖြဲကားပြီး ကိုထွဋ် အပေါ်ကနေ တက်ခွတယ်..။ ရင်ဖိုလှိုက်မောစွာ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ငြိမ်ခံနေမိတယ်..။ မျက်လုံးတွေပင် မဖွင့်နိုင်တော့လောက်အောင် အရက်ရှိန်က တက်လာပြီလေ..။
စိမ်းဆတ်ဆတ်ကြီး ထိုးထည့်လိုက်တာ..။ဒေါ်သက်ထားဝင်း ပူခနဲ နာသွားတယ်..။ ကိုထွဋ်ကတော့ ဂရုမစိုက်ပဲ …. ပါကင်ဖွင့်နေပြီမို့ ပေါင်တံထွားထွားကြီးတွေကို အတင်းမ တင်ကာ နောက်ထပ် ဆောင့်ချလိုက်တယ်..။
သွေးတွေ ဒလဟော ကျလာပြီး မျက်လုံးမှလဲ မျက်ရည်တွေက ပိုးပိုပေါက်ပေါက်နဲ့ ကျလာတယ်..။ နာလိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း ..။ မူးတာတွေ ဘာတွေ ပျောက်သွားတယ်..။ အပျိုမကြီး မခံနိုင်ရှာ..။ စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ခံရခက်လိုက်တာ…။
“ခဏလေးပါ သက်ထားရဲ့ ခဏလေးပဲ…“
ကိုထွဋ်က မျက်လုံးမှိတ်ပြီး သူမစကားကို လျစ်လျူရှုထားတယ်..။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အရသာ…။ ဘယ်လောက်မှတောင် မဆောင့်ရသေး…။ အထဲက နူးညံ့လွန်းတဲ့ အသားနုကလေးတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုက ငေါ့ခနဲ ငေါ့ခနဲ ဖြစ်လာစေတယ်…။ ကိုထွဋ် ဘယ်လိုမှ အောင့်မထားနိုင်တော့…။ တစ်ချီ ပန်းထုတ်ပြီး ပစ်လှဲချလိုက်သည်…။
ကာမ အရသာဆိုတာ ဒါလား..။ ဘာမှန်းညာမှန်း သေသေချာချာ မသိလိုက်ရပဲ ယောက်ျားတစ်ယောက် အပျိုစင် ပန်းဦးလေးကို ဆွတ်ခူးသွားပြီ..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဝမ်းလဲနည်းမိ ရှက်လဲ ရှက်မိတယ်..။ နာလဲနာတယ်..ဘယ်လို ခံစားရမှန်း ကို မသိချေ..။
အလိုက်ကန်းဆိုး နားမလည်တဲ့ ကိုထွဋ်…။ ဒီက သူ့ကို စကားတောင် မပြောချင်တော့အောင် ဖြစ်နေချိန်မှာ သူကလိုချင်တာ ထပ်တောင်းနေပြန်သေးတယ်…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း မျက်ရည်တွေ ယိုစီးကျလာပြီး ကိုထွဋ်ကို မကြည့်ချင်လို့ ဟိုဘက်လှည့်ပြီး စောင်းအိပ်နေလိုက်တယ်..။ စိတ်ထဲကလဲ မပါလှ…။ အိမ်ထောင်သည် မိန်းမတွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောကြတာပဲ..ဆွေမျိုးတောင် မေ့သွားတယ်ဆိုပြီး …။ အလိုးခံ ရတာ ဖီလင်က အရမ်းကိုမိုက်တာပဲဆို…ခုတော့ ကြားဖူးတာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်..။ တခြားစီပဲ…နာတာပဲ ခံစားရတယ်…။
သိပ်ဆိုးတဲ့ ကိုထွဋ်..။ အရှေ့ကို လုပ်ရုံနဲ့ အားမရသေး…..။
“ဟင့်အင်း….ကိုထွဋ် ..အနောက် မလုပ်နဲ့..“
“ဒါဆိုလဲ သက်ထားရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးပဲ လိုးမယ်နော်..“
ကြည့်…မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့စကား..။ နားထဲကြားရတာ ရှက်စရာ..။ လူကြီးလူကောင်းယောင် ဘယ်လောက်ပဲ ဆောင်ဆောင် ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမအနံ့ ရရင် သူတို့ဇာတိက ပေါ်လာစမြဲပဲ…။ သိပ်ကို ဏှာဗူး ထကြတာပဲ..။
“သက်ထားလေး…ထ…ကိုယ့်ကို ကုန်းပေးပါအုံး အချစ်ကြီးရဲ့…“
တကယ်ပါပဲ….သူ့ဟာက ရိုးရိုးလုပ်လို့မပြီးနိုင်ဘူး…။ ဘာမှ ပြန်ပြောချင်စိတ် မရှိတာနဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း လေးဘက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးလိုက်တယ်..။ မြန်မြန် ပြီးသွားမှ သူမ သက်သာရာ ရတော့မှာပဲ…။
“ခါး ခွက်ထား…ဖင်ကြီးကို ကော့ပေးပါ သက်ထားရဲ့…“
တင်သား မို့မို့ဝင်းဝင်း ကြီးတွေက ချွေးတွေနဲ့ တဖိတ်ဖိတ် တောက်ပစိုအိနေတယ်….။ ခြူရက်စရာ မရှိတဲ့ ငွါးငွါးစွင့်စွင့် ပန်းပွင့်ကြီး..။ တောင့်တင်းဆူဖြိုးလွန်းတဲ့ ရေဆေးငါးကြီး ကို လုပ်လို့အားမရနိုင်တော့.. ဒေါ်သက်ထားဝင်းရဲ့ ခါးကျဉ်းကျဥ်းလေးကို ကိုင်ပြီး ကိုထွဋ် အားနဲ့ ဆောင့်သွင်းချလိုက်တယ်…။
လီးတစ်ဝက်လောက် ပြန်နှုတ်လိုက်တယ်…။ မထင်လောက်အောင် စေးပိုင်တင်းကြပ်လို့ ကိုထွဋ် ချီးကျူးမိတယ်…။ဒီလောက် တစ်မိနစ်လောက်ထဲနဲ့ ဘယ်မိန်းမကိုမှ ကိုထွဋ် သုတ်မထွက်ဘူးခဲ့ ..။ စံချိန်ကျိုးတော့မယ် ထင်ပါရဲ့…။ တောင့်လိုက်တဲ့ထု…။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အထည်ကြီး..။
ဒေါ်သက်ထားဝင်းက ခုမှ ကကြီးခခွေး လက်ပေးသင်တုံးရှိသေးတယ်…။ကိုထွဋ်က ဒုတိယအချီ ပြီးသွား ပြန်ပြီ…။ ကျေနပ်စရာ တစ်ခုမှ မဖြစ်..အပျိုမကြီးအတွက်…။
ကိုထွဋ်ကတော့ ဝတ်ရည်တွေနဲ့ မှည့်ရွှမ်းလွန်းလှတဲ့ အပျိုတင်းပြည့်မကြီး တစ်ယောက်ကို အားရပါးရ စပ်ယှက်လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်မှာ အကြောအချဉ်တွေ စိမ့်တက်သွားအောင် ကိုအရသာ တွေ့သွားရတော့သည်…။
ဟိုး….အဝေးဆီကနေ လေနီကြမ်းတချက် တိုက်ခတ်ရာကနေ ရောက်လာတဲ့ လေမျှင်းမျှင်းလေးကို ဇိမ်ယူ ခံစားရင်း…အစောက အမျိုးသမီး အကြောင်းကို တွေးနေမိတယ်…။..အင်း…ဒေါ်သက်ထားဝင်း…ဆရာမဒေါ်သက်ထားဝင်း…ပညာတတ်သလောက် ရုပ်ကလဲ ချောမောတယ်..ဆိုတော့ တော်ရုံနဲ့ ဘယ်ခွေးမှ လူမထင်ဘူး ဆိုတဲ့အမျိုးထဲက နေမှာပေါ့..။ ချောသလောက်လှသလောက်လဲ စွာ.၊ စွာလောက်အောင်လဲ ဖုထစ်ကြွရွ နေတဲ့ အလုံးအထည်ကြီးတွေက မြင်သူ ပုရိသ တိုင်းကို ရင်ဗလောင်ဆူအောင် ပြသနေသလို ဆိုတော့ သူ့လိုကောင်စားမျိုးနဲ့ မတည့်တာ သိပ်တော့ မဆန်း..။ခုနကတောင်..ကြည့်ပါဦး..ဂျင်းဘောင်းဘီ အကြပ် ဝတ်ထားတော့ ယောင်ကိုင်းနေသလို ဖုဖောင်းကြွတက်နေတဲ့ ဟာကြီးတွေက ဘယ်သူ့မှ ပမာမခန့်…..။ ဘောင်းဘီထဲက ခုန်ပေါက်ထွက်မတတ်..။ တော်တော်တန်တန် အိုးကလေး ရှိရုံ ၊ တင်ကလေး မို့ရုံနဲ့တော့ ဘောင်းဘီအကြပ် မဝတ်လေနဲ့..။ဘောင်းဘီ အပျော့တွေပဲ ဝတ်..။ နို့မို့ ဂျင်းအကြပ်တွေက ရှိတဲ့ဟာလေးတွေပါ ရှုံ့ပြီး အဖျား ရှူးသွားမယ်..မှတ်…။ အင်း….ဒီမိန်းမ ကျတော့လဲ ဘဝပေး ကောင်းလွန်းတာပဲလား…။လေ့ကျင့်မှုတွေ ကြောင့်လားတော့ မသိ။ ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ ကြီးတွေက ထောင်းထောင်း ပြီး ဘာ……လုပ်ပစ်လိုက်ရ…။
ကုလား ရောက်တတ်ရာရာ တွေးနေမိတယ်…။ လေပြေအေး ကလေးကလဲ သာသာညှင်းညှင်း…အေးအေးချမ်းချမ်း ဆိုတော့ စိတ်ကူးယဉ်လို့ အကောင်းဆုံး မနက်ခင်းလေးပေါ့..။ တစ်နာရီထိုးလုပြီ…။ မကြာခင်ပဲ အရှေ့ဆီက ရောင်နီသန်းလာတော့မယ်..။ သည်နှုန်းအတိုင်း ဆိုရင် မော်လမြိုင် ရောက်ဖို့က သိပ်မလိုတော့..။ ဒါတောင်မှ ဒီတောင်က ကြားတောင် ကဒုံကနိ..။ ကြားတောင်ဆိုတော့ ခိုြး့ပီး ခုတ်ရတဲ့ မော်တော် လေ..။ စက်ကတော့ တကယ့် အပျံစား..။ ခရီးသည်တွေဆီက မတန်တဆ ဈေးတောင်းပြီး မောင်းဆွဲတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအစား မှောင်ခို မော်တော်..။ ဒီလိုမော်တော်မျိုးကို စိတ်မချရတဲ့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်မပြု..။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်မချရလဲ ခရီးသည်တွေကတော့ လိုရာခရီးကို အမြန်ရောက် ပြီးတာပဲ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ စီးကြစမြဲ..။
အခုလဲ ကုလား ဦးလေးဆုံးပြီ ..အမြန်လာ ဆိုတဲ့ သံကြိုးစာကြောင့် ကမန်းကတန်းနဲ့ ဇာတိပြန်လာတာ..။ ဒီဦးလေးကလဲ ကုလားအတွက် တစ်ယောက်တည်းသော ဆွေမျိုး..။အသုဘ အမှီ ရွာမှာ ရှိချင်လို့သာ ပြန်လာရတာ..။ တကယ်တမ်းဆို ရန်ကုန်မှာပဲ ပျော်တယ်…။
“ အင်း…ဒီမိန်းမနဲ့ ငါကတော့ ရေစက်ပဲ..`
ဒေါ်သက်ထားဝင်း အကြောင်းကို ပြန်တွေးမိတော့ ကုလား သွားကြီး အဖြီးသားနဲ့ ပြုံးမိတယ်..။ ရင်ခုန်စရာ…အင်း..ခုန်လောက်စရာ သွေးဆူစရာ အလှအိုးမကြီးကတော့ သူ့ကို မြင်တာနဲ့ အော်ဂလီဆန်သွားဟန်လုပ်ပြီး အခန်းထဲ ဝင်ပြေးသွားတယ်…။ ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ…။
“ဟေ့…တက်မတွေ ဖြုတ်ထားလိုက်တော့ ဟေ့…“
အတွေးတွေ ဘောင်ဘင်ခတ်နေရာကနေ စူးရှရှ အော်လိုက်တဲ့ အသံနက်ကြီးကြောင့် မော်တော်ပေါ်က လူတွေအားလုံး ခေါင်းထောင်သွားကြတယ်..။ သြော် ..မိုးရွာတော့မှာမို့ လေကြောင်းမှားမှာ စိုးလို့ ထင်ပါရဲ့..။ ကုလားထင်မိထင်ရာ တွေးမိတယ်…။ ဟိုးမှာလဲ တိမ်သား တစ်အုပ်က ထူထပ်မဲညို့လာတယ်..။ ချက်ချင်းမှ ချက်ချင်းကို ဖြစ်သွားတာ..။မိုး .စရွာတယ်..။ ဖွဲဖွဲ ကလေး..။ သဲသဲ..ကလေး..။ပြီးတော့..ဟာ…ဒါ..ဒါ….။
ဘေးကလူ တစ်ယောက်အသံ ကြားမှ ကုလားအသက်ဝင်လာတယ်..။ ဟာ…ဂွပဲ…ဟုတ်တာပေါ့..။ ကြည့်စမ်းပါဦး…ခုန…လေပြေကလေးတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိ..။ မရှိတော့…..။ သူတို့အစား ဝေါခနဲ မြည်ကာ သဲသဲထန်ထန် ရွာချလာတဲ့ မိုး…….။ အကုန်လုံး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ…။မော်တော်တစ်စီးလုံး မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက်..။ မာယာ ဆိုတာ ဒါပါပဲ..။ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ မာယာ..။
နက်ရှိုင်းတယ်..။တည်ငြိမ်တယ်..။ခန့်ငြားတယ်..။ရင့်ကျက်တယ်..လို့များ မချီးကျူးလေနဲ့…။ ချက်ချင်းကို မြောက်ကြွ မြောက်ကြွ လုပ်ပြလိမ့်မယ်…။ အခုလဲ စပြီ…။ မုန်တိုင်း…မွှေပါပြီ…။ မုန်တိုင်းက လေကိုလက်တို့ပြီး သူနဲ့အတူ မိုးကိုပါ အဖော်စပ် ခေါ်လာပါတော့တယ်…။ ပြီးတော့ သူ့မိတ်ဆွေ လှိုင်း ခေါင်းဖြူ ကြီးတွေနဲ့ အတူ ဝုန်းခနဲ ဝုန်းခနဲ …။ မော်တော်ကလေး …အရုပ်လေးလိုပဲ မြောက်..မြောက်တက်သွားတယ်..။ မော်တော်ထဲမှာ ဘုရားတသံတွေ တရားစာရွတ်သံတွေ ၊ အော်မြည်သံ အမျိုးစုံ ပဲ ဆူညံ ပလူပျံနေတာပဲ…။ ဝုန်းခနဲ မြှောက်တင်လိုက်..ဗြုန်းခနဲ ပြန်ချလိုက်နဲ့ မုန်တိုင်းက မော်တော်လေးကို ကလူသလို မြှူသလို ကျီစယ်နေပြီ….။ စကောထဲက ဇီးဖြူသီးတွေလိုပဲ ဟိုပြေးလိုက် ဒီလိမ့်လိုက်နဲ့ ရောက်မိရောက်ရာ ၊ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ..။ နီးရာ ကို လှမ်းကိုင်ရင်း ငိုသူက ငို၊ ကျိန်ဆဲသူက ကျိန်ဆဲ၊ အမေလေး တသူ အဘလေး အော်သံ၊ ငိုယိုသံ တွေနဲ့ ငရဲ ပွက်နေတဲ့အလား..ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်ကုန်ကြပြီ….။ မုန်တိုင်းက အားရအောင် တိုက်ခတ်ရင်း …မော်တော်ပေါ်မှာလဲ ဟိုရောက်ဒီရောက် လောကငရဲ ကျနေသလို ဝုန်းဒိုင်း ကြဲနေတယ်…။ ကုလား ကတော့ မကြောက်..။ဗောကွင်း တစ်ကွင်း တွေ့တာနဲက ဆွဲယူပြီး ကိုယ်မှာ စွတ်ချလိုက်တယ်…။ ဒီမိုး ဒီလေနဲ့ ဒီမော်တော် ဘယ်လောက်များ ခံနိုင်ပါ့မလဲ..။မကြာလိုက်ပါ..။ မုန်တိုင်း ဘီလူးကြီး မော်တော် လေးကို ရေကူးစမ်းသပ် လိုက်ပါပြီ…။ ဖျောင်း ခနဲ တက်မ ကျွတ်ထွက်သွားတယ်..။ ဗြောင်းဆန် လူးလိမ့်သွားပြီး ဆလင် ခန်းထဲ ကို ရေတွေ ဝင်လာတယ်..။ တစ်ချက်မှာ လှိုင်းလုံးလေးက အပင့် မုန်တိုင်းက ရိုက်ချလိုက်တာ…ဘော်လီဘော စည်းအတွင်းမှာ ရိုက်ချခံလိုက်ရတဲ့ ဘောလုံးလေး တစ်လုံးလိုပဲ အုန်းခနဲ…။
“ အမေကြီးရေ…သမီးကို ကယ်ပါအုံး….“
သွားပြီ…။ အသံမျိုးစုံ..။ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့..။ လက်တွဲညီညီနဲ့ မိုးနှင့် မုန်တိုင်းက ပင်လယ်ဖျံလေးကို ရေထဲ နှစ်လိုက်ကြပြီ…။ကုလား အချိန်မဆွဲတော့…။ ပင်လယ်ထဲ ခုန်ဆင်းလိုက်တော့ သည်..။ အေးခနဲ…အပြင်မှာရော အသဲထဲမှာပါ အေးခနဲ ဖြစ်သွားတယ်…။ မိုးကလဲ ရွာ..၊ လျှပ်စီးကလဲ မလက်…။ ဘာဆို ဘာမှ မမြင်ရတော့အောင်ပဲ ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေပေမဲ့ ကုလား ဇွဲမလျှော့..။ ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် မှန်ပေမဲ့ ငါသေမှသာ ငါ့ကိုယ်ကို မင်းရမယ်..ပင်လယ်ကြီးရေ..။ဗောကွင်းခိုစီးလိုက် …တစ်ခါတရံ ကူးခတ်လိုက်နဲ့ မရပ်မနား လှုပ်ရှားနေဆဲ…။ ကုလားတစ်ကောင် ရေကူးနေတော့တာပဲ….။
လှိုင်းပုတ်သံ ကြားနေရသည်။ အိပ်မက်လိုလို တကယ်လိုလို၊ သာယာလိုက်တဲ့ အသံလေး…ချိုချိုအေးအေးလေး…။ ငှက်ကျေးလေးတွေရဲ့ အသံစာစာလေးတွေပါ..။ တစီစီ တကျီကျီ မြည်သံလေးတွေ ကြားနေရတာ…။ နားကသာ ကြားနေရပေမဲ့ လူကတော့ မလှုပ်ချင် ။ မျက်လုံးတွေတောင် မဖွင့်နိုင်အောင် ကိုယ်လက်တွေ လေးလံ ကိုက်ခဲနေသည်..။ မထချင်..။လှိုင်းသံလေးတွေကို နားထောင်ပြီး ကမ်းခြေ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အိပ်နေရသလို ခံစားရသည်…။ ပါးပြင်မှာ အေးစက်စက် အထိအတွေ့၊ မျက်လုံးကို မဖွင့်ချင် ဖွင့်ချင်နဲ့ ဖွင့်ရတယ်..။
“ဟင်…ငါ…ငါ ဘယ်ရောက်နေတာပါ လိမ့်…“
ရုပ်နဲ့စိတ် ကပ် ကပ်ချင်းပဲ ပထမဆုံး မြင်ရတာက မှိုင်းမှိုင်းညို့ညို့ တောအုပ် တောတန်းလေး တစ်ခု…။
“ ငါ…ငါ မသေသေးပါလား…“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း အကြီးအကျယ် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားတယ်…။
ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ ခုန်ပေါက် အော်ဟစ်ပစ်လိုက်မိတယ်….။ ကမ်းစပ်ကလေး…အခုမှပဲ ရေးတေးတေးနဲ့ မှတ်မိလာတယ်…။ ညတုန်းက မော်တော်လေး….ပင်လယ်ဖျံ….လေး ရေနစ်တာပဲ…။ မုန်တိုင်းမိခဲ့တာ…ပဲ…။ သေပြီလို့တောင် ထင်ခဲ့ရတာ.. ။ ကိုယ့်ရှေ့မှောက်တင် ဝုန်းခနဲ လှိုင်းရိုက်ပြီး ပင်လယ်ထဲ လွင့်စင်ကျသွားတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး..။ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ပဲ ပျဉ်ချပ်ကြီး တစ်ချပ်ကို ဖက်တွယ်ပြီး အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ ပင်လယ်ထဲ ခုန်ဆင်းခဲ့တာ…။ ပင်လယ်ထဲမှာ ကူးလိုက် ခတ်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး သတိလစ်ပြီး သက်လုံကျသွားတဲ့ နောက်ပိုင်း မသိတော့..။ ခုတော့…ငါ မသေသေးပဲကိုး…။
ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ် ရောက်နေတာပဲလား…။ ဒါဆို ဒီကျွန်းမှာ လူရှိမှာပါ..။ ငါ အကူအညီ တောင်းပြီး ရန်ကုန်ပြန်လို့ ရသေးတယ်…။ အင်း…အဓိက ကတော့ ငါမသေပဲ အသက်ရှင်သန်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်…။ ငါ…မသေရဘူး…ငါမသေဘူး…။
ခုန်ပေါက်ပြီးထကာ ပင်လယ်ပြင်ကို မျှော်ကြည့်မိတယ်…။ အစုတ်ပလုပ် ပင်လယ်ကြီး..။ အခုကျတော့လဲ သူ မဟုတ်သလိုပါပဲလား…။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးငါး နာရီလောက်ကတော့ မော်တော်လေး တစ်စီးကို ရက်ရက်စက်စက် ချိုးဖဲ့ နှစ်မြှုပ်ခဲ့ပြီး လူငါးဆယ်ကျော်ကို သေတယ် ရှင်တယ် မသိရအောင် ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်ကုန်အောင် လုပ်ပစ်ခဲ့တာ သူမဟုတ်သလို ပါပဲလား ပင်လယ်ပြင်ကြီးရယ်…။ကဗျာ ဆန်ဆန်ကလေးလို တွေးမိပြီး ကိုယ့်အတွေးကို ကိုယ်သဘောကျစွာ ပြုံးမိရဲ့..။ ခုချိန်မှာတော့..အကူအညီလေး တစ်ခု ရလိုရငြား တွေ့တဲ့လူဆီမှာ တောင်းခံဖို့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဝန်မလေးတော့ပြီ…။ ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ လျှောက်လာခဲ့တာ…။ စားစရာ သီးနှံပင်လေးတွေနဲ့ ဥယျာဉ်ခြံလေး တစ်ခြံလို အလေ့ကျ အပင်တွေ ရှင်သန်လွန်းလိုက်တာ..ကျွန်းကလေးပေါ်မှာ အကောင်ပလောင်တွေလဲ သိပ်မတွေ့ရ..။ လူသူ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုရော…။
“ဟင်…ငါ အခုန ရပ်ခဲ့တာ ဒီနေရာပါ..“
ကမ်းစပ်သို့ပင် ပြန်ရောက်လာရတယ်…။ မဟုတ်သေးပါဘူး ဆိုပြီး နောက်တစ်ပတ် ထပ်ပတ်ကြည့်မိတယ်…။အစကနေရာ သူမရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ကမ်းစပ်ကို ပဲ ပြန်ရောက်လာတယ်…။ လူရိပ်လူယောင် မတွေ့..။သာမန်ဖွတ်ကလေး ပုတက်ကလေး တစ်ကောင်နှစ်ကောင်သာ ဖြတ်ခနဲ တွေ့ရတယ်…။ တကယ်တော့ လူသူလေးပါး မရှိတဲ့ကျွန်းကျဉ်းကျဥ်းကလေး တစ်ခုပါ..။
ဘဝမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အားငယ်စိတ်တွေ ဖြစ်လာရတယ်..။ သောကများ ဖိစီးလာတယ်..။ ငါ…ငါတစ်ယောက်တည်း ဆိုတဲ့ အထီးကျန် အသိက ခြောက်ခြားစေတယ်..။ အားငယ်ကြောက်လန့်စေတယ်…။ လူသူမဲ့..ကူရာကယ်ရာမဲ့ ..။အကူအညီ မလာ…အခြွေအရံ ဗလာနဲ့ ဒီကျွန်းကလေးပေါ်မှာ ငါတစ်ယောက်ထဲ နေသွားရရင်…။ တွေးရင်း ကြောက်လာမိပြီး….
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရူးသွားပြီထင့်…။ ပင်လယ်ပြင်ဘက် မျက်နှာမူပြီး ဟိုပြေးဒီပြေး အော်ဟစ်နေမိတယ်…။ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကတော့ ဘာသံမှ မကြားရသလို ငြိမ်သက်နေ၏…။
အော်တယ်..ဟစ်တယ်…။အကြီမ်ကြိမ် ကြိုစားတယ်..။ တကျော်ကျော် အော်ရင်းနဲ့ ပဲ အသံတွေ တိမ်ဝင်သွားရတယ်..။စူပါမင်းလဲ မရှိ..၊ ဘာစပိုက်ဒါမင်း မှလဲ ရောက်မလာပါ…။
ပီဘိ ကလေးလေးလိုပင် ချုံးပွဲချ ငိုလိုက်မိတော့တယ်…။ အသံတွေလဲ ပြာကပ်ပြီး အသက်ရှူတောင် မမှန်ချင်တော့..။ဘယ်သူမှလဲ သူ့အဖြစ်ကို မသိနိုင်ကြ..။ စိတ်ပျက် အားငယ်ခြင်း ၊ ဝမ်းနည်း ပူဆွေးခြင်းတို့ ရောထွေးလျက် ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုယို တမ်းတနေမိတယ်…။
မောပန်း နွမ်းနယ်လာတော့တယ်..။ ငိုလို့ အားမရသေးခင်မှာပင် မျက်လုံးတွေက ပြာဝေလာပြီး နုနယ်လွန်းလှတဲ့ အပျိုမကြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်းခမျာ သောင်ပြင်ပေါ်မှာ လဲကျ သတိ လစ်သွားတယ်…။
ဘယ်လောက်ကြာကြာ သတိမေ့နေသလဲ မသိ..။အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်ပြီး လန့်နိုးလာတော့ နေကခြစ်ခြစ်တောက် ပူနေပြီ…။ ကမန်းကတန်း လူးလဲ ထလိုက်တယ်…။ အိပ်ပျော်သလို ဖြစ်သွားတာ အားလေးတော့ နဲနဲပြည့်သွားပါရဲ့..။ ခုမှ ဗိုက်ကဆာလာပြန်ရော…။မရမှန်း သိလေ ပိုပြီးဆာလာလေ..။ ဘယ်လိုများ စားစရာ ရနိုင်ပါ့မလဲ..။ ရေလဲ ငတ်တယ်…။
ငိုသံတွေ ချက်ချင်းတိတ်သွားရတယ်…။ လူသံတစ်သံ ကြားရတယ်ဆိုရင်ပဲ..အားတက်သွားတယ်..။ ယောက်ျားသံပဲ..။ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကယ်ရာမဲ့ နေတဲ့သူကိုတော့ မနှိပ်စက်တန်ကောင်းပါဘူး…။
အလဲ့..ကိုယ့်အသံတောင် ကိုယ်မမှတ်မိအောင် ချိုလွင် ပျော့ပျောင်းနေတဲ့ အသံနွဲ့နွဲ့ကလေး..။
“ပတ်ပြီး ဒီဘက် လျှောက်လာခဲ့…“
ချက်ချင်းပဲ ကပျာကသီ ထပြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်း လမ်းညွှန်းအတိုင်း လျှောက်သွားမိတယ်..။ ကျွန်းကလေးရဲ့ တစ်ဖက်အခြမ်း ကမ်းစပ်..။အဲဒီမှာ ကျောက်တုံးကြီးတွေလဲ ရှိတယ်..။ မွှေးလိုက်တာ….လေတင်ကနေ သယ်လာတဲ့ အနံ့လေး…ငါး….ငါးကင် အနံ့ကလေး မွှေးလိုက်တာနော်…။ ငါးကင်နံ့ရလာတော့ ဝမ်းဗိုက်ထဲက တကြုတ်ကြုတ်နဲ့ ပိုပြီး သောင်းကြမ်းလာတယ်…။ ဆာလောင်စိတ်တွေက တအိအိ တိုးလာတယ်…။ခြေလှမ်းကို ပိုသွက်မိတယ်..။ချုံနွယ်များကို ဖယ်ကာ….
“နင်တွေ ငါတွေလုပ်မနေနဲ့။ အဲဒီမှာ ငါး ကင်ထားတယ်..အကောင်ကြီးကြီးတစ်ကောင် ခင်ဗျား ယူစားလိုက်…“
ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်းက ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်အော်ဟစ်နေသလောက် သူကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပင်။ ပိန်ကပ်ကပ် ဆေးသမားလိုလို ဘိန်းစားလိုလို စုတ်ပြတ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့..။ အပေါ်မှာလဲ ကိုယ်က ဗလာ..အောက်မှာကတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အတို အစုတ်နဲ့ ..ငါးကင်ကိုသာ မြိန်ရေယှက်ရေ စားနေတယ်…။
ကုလား တမင်ပဲ အရွဲ့တိုက်ပြီး ပလုပ်ပလောင်း စားပြလိုက်တယ်..။တစ်ညလုံး ရေကူးလာပြီး မနက်ကလဲ ကမ်းစပ်မှာ ငါးထိုးနေရတာနဲ့မို့ ပင်ပန်းနေတော့ အစားကို တတ်နိုင်သလောက် စားနိုင်သလောက်ဖြည့်ထားတာသာ အကောင်းဆုံးပဲ..။ အပျိုမကြီးကတော့ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့သူ့ဘက် ခိုးကြည့်လိုက်၊ နှုတ်ခမ်းစူပြီး ဟိုဘက် လှည့်သွားလိုက်နဲ့ အရှုံး မပေးသေး…။ နေပါစေ..ခင်ဗျားကြီး ဒီလောက် အိုက်တင်ခံလွန်းတာ ငတ်နေပေဦးတော့…။ ကောင်းတယ်…။
“အား..။ပလပ်..ပလပ်..စားလို့ကလဲကောင်း ..ဟား..၀ါး..အိပ်တောင် အိပ်ချင်လာပြီ……..“
အပျင်းကြောဆန့်ရင်း ကုလား တစ်ယောက်ထဲ ရေရွတ်သလို လို ပြောဆိုပြီး တဖက် လှည့်ထွက်သွားတယ်..။
မီးဖိုပေါ်မှာ လက်ကျန် ငါးကင်နှစ်ကောင်။ အနံ့ကလေးတွေက မွှေးမွှေးသင်းသင်းနဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်းရဲ့ ဂနဓရုံကို ကလူ၏သို့ မြှူ၏သို့ ..။ ဗိုက်ထဲကလဲ ဆာလွန်းလို့ အောင့်သလိုလိုတောင် ဖြစ်လာရတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကုလားခြေသံများ ပျောက်သွားတဲ့အထိ စောင့်ကြည့်နေပြီးမှ ငါးကင်ဆီကို မဝံ့မရဲ..ချီတုံချတုံ နှင့် လက်လှမ်းလိုက်တယ်..။ လက်ထဲက ငါးကင်ကို သွားရည်ယိုပြီး တံတွေးများပင် မျိုချမိတယ်..ကိုက်ဖဲ့မဲ့ အလုပ်…
“ကောင်းပါတယ်..ဟိုတယ်တွေမှာ ဆိုရင် တစ်ကောင် လေးထောင်လောက် ပေးရမှာပဲ..“
ပြီးပါလေရော…။ အပြောကြီးခဲ့ လေသမျှ အရှက်လုံးလုံး ကွဲပြီ..။ စောက်ကောင် တစ်ကျော့ပြန်လှည့်လာပြီး တမင် မရရအောင် စောက်ရှက်ခွဲသေးတယ်..။ ကုလားကတော့ စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ခြေလှမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့ ပြန်ထွက်သွားတယ်..။ စောက်ကောင်…စောက်ကောင်..စိတ်တိုပြီး ကျိန်ဆဲရေရွတ်ရင်း ငါးကင်ကို အားရပါးရ စားလိုက်တယ်..။ ချိုလိုက်တဲ့ ငါးအရသာ ။ ဗိုက်ဆာနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘာနဲ့ စားစား ထမင်းမြိန်တယ် ဆိုတာ ဟုတ်မယ်..။ ပြိုက်ခနဲ ဆိုသလို ငါးကင်နှစ်ကောင် အရိုးတောင် ရှာမတွေ့တော့ဘူး..။ အတော်လေးတော့ နေသာထိုင်သာ ရှိသွားတယ်..။
စားသောက်ပြီးလို့ ကျွန်းတစ်ဖက်ခြမ်းကို ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်..။
“ဟဲ့..ဟဲ့ ကုလား နင့်မှာ အဝတ်အစား အပို မပါဘူးလား..“
“ဘယ်လိုလုပ် ပါပါ့မလဲ…ဒီမှာ ဓါးနဲ့ မီးခြစ်တောင် ကံကောင်းလို့ ပါလာတာ..“
“ငါ…ငါ့အဝတ်အစား တွေ ရေစိုပြီး လေးနေလို့ဟ…အဝတ်အစားလဲချင်လို့…“
“ဒီမှာ ဘယ်လိုနေရ ထိုင်ရ စားရမယ်မှန်းတောင် မသိသေးဘူး ..ခင်ဗျားက လှဖို့လောက်ပဲ စဉ်းစားနေတယ်..“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း မျက်နှာ ရဲခနဲ ဖြစ်သွားတယ်..။ မသာ…နင့်ဂွင် ဝင်လာပြီဆိုပြီး စွတ်ဟောက်နေတာပေါ့..။ ဟင်း..တလုပ်စားဖူးတဲ့ ကျေးဇူးရှင်မို့သာ..ရန်ကုန်မှာသာဆို ပါးရှစ်စိပ်ကွဲနေပြီ..။ သူ့ဘက်မလှည့်ပဲ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက် နဲ့ တွေးနေမိတယ်..။
“သွား ဟိုမှာ နေပူထဲ သွားထိုင်နေဗျ..။ ခြောက်သွားလိမ့်မယ်…“
“မထိုင်ရင်လဲ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေ….“
“ဘယ်လိုပြောရမလဲ ကျုပ်အဝတ်တွေ ဟိုမှာ ကြည့် အလံ လုပ်ထားတာ..၊ ဒီမှာ လာထိုင်နေတာကလဲ ညကကျုပ်တို့ မော်တော်ကနေ ဘာလေးများ ရေကြောင်းသင့်ပြီး မျောလာမလဲ လို့လာစောင့်နေတာ..“
ဟုတ်ပါတယ်။ လေမှာ တလူလူ လွင့်နေတာ သူ့အဝတ် အစုတ်အပြတ်တွေပေါ့..။ ၀ါးလုံးတစ်ခုမှာ စုချည်ပြီး ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ ထောင်ထားတယ်..။ ကယ်ဆယ်ရေး အချက်ပြ..။ ဒီလိုကျတော့လဲ ဒင်းက စေ့စပ်သားပဲ…။
“နင်..က ဘယ်လိုလုပ် ဒီမော်တော်နဲ့ ပါလာတာလဲ..“
“ကျုပ်ဥိးလေး ဆုံးလို့ ၊ ကျုပ်တို့က ၀ါးတောမှာ နေတာ..၊ တစ်နှစ်လဲ ပြန်မယ် ပြန်မယ်နဲ့ မပြန်ဖြစ်ဘူး..၊ ခုကျတော့ အသုဘ တောင် မမှီတော့ဘူး…ကျုပ်တော့ ခွေးဖြစ်တာ ပဲ..“
“ငါ..ငါတို့ကို ကယ်မဲ့သူတွေ လာပါ့မလား..ဟင်“
“ဒါတော့ ကျိန်းသေ မပြောနိုင်ဘူး.၊ ရောက်ရင်လဲ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းလောက် ရောက်မယ်..၊ မရောက်ရင်တော့ လုံးဝ ရောက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး…။“
“ဘာဖြစ်လို့ ငိုပြန်တာလဲ၊ ခင်ဗျားတို့ မိန်းမတွေဟာ တဆိတ်ရှိ ဒါပဲ…“
“ဟင့်…အင့်….ငိုမှာပဲ…ငါက ကိုထွဋ်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ဆွေမျိုးတွေကို လာဖိတ်တာ..။ အခုတော့ တစ်သက်လုံးပဲ ဒီမှာ သေသွားရတော့မဲ့ ပုံ ..ဟီး..ဟီး…“
ကဲ..ကြည့်ပါဦး.အသက်သုံးဆယ် အရွယ် တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့် မိန်းမလှကြီး……ကလေးငယ် ကလေးတစ်ယောက်လို နှပ်တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ အားငယ်ကာ ဝမ်းပန်းတနည်း ငိုချလိုက်တော့ ကုလား ရယ်ချင်သွားတယ်..။
“ကဲပါ…ငိုမနေပါနဲ့ ..လှတာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့..“
“အိုး…ငိုတာပဲ လှအောင် ငိုရဦးမလား ရှူနာရှိုက်ကုန်း ကုလားရဲ့..`
“ဒါဖြင့်လဲ…ဟိုဘက်သွားငို ဒီမှာ စိတ်ရှုပ်ရတဲ့ အထဲ..“
“သွားမယ်…သွားမယ် နင်သာ အဲဒီမှာ ပင်လယ်ထဲ နစ်သေသွားပါစေဟယ်…“
“ကျုပ်သေရင် ခင်ဗျားကို အရင်ဆုံး လာခြောက်မှာ..“
အဲ…လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ တုံ့ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်..။ပြီးတော့မှ ဘောက်ဆတ် ဘောက်ဆတ်နဲ့ ဆက်ထွက်သွားတယ်….။ တကယ်ပဲ..ကိုထွဋ် …ရှင်မကောင်းဘူး။ ဥိးထွဋ်ကျော်…ဒီမီးက ရှင်မွှေးလို့ဖြစ်ရတာ။ ရှင် အခွင့်ရေး ယူလို့ ဒီဘဝ ရောက်ရတာ..။ ဦးထွဋ်ကျော် အကြောင်းကို တွေးမိတော့ ဟိုနေရာကပဲ ယားသလိုလို၊ ဒီနေရာကပဲ ယားသလိုလို ဖြစ်လာရတယ်..။ သူ့ကြောင့်ပဲ အမှန်တော့ လက်ထပ်မဲ့ အစီအစဉ်က ဝေးသေးတယ်..။ နောက် နှစ်နှစ်လောက်မှ လို့ ပြောထားတာ..။ဒါကို ညာတာပါတေးနဲ့ အရက်ကို အအေးထဲ ရောတိုက်ပြီး မတရား ကျင့်တာ..။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဒေါ်သက်ထားဝင်း လုံးဝ အတွေ့မခံ…။ အိမ်ကို ဖုံးတွေ တဂွမ်ဂွမ် ဆက်၊ သင်တန်းကိုလဲ မျက်စိနောက်အောင် လာ၊ စာနဲ့ တောင်းပန်၊ ဟိုလူနဲ့ ပြောခိုင်း ဒီလူနဲ့ ပြောခိုင်း…။ တွေ့တော့လဲ သူ အရမ်းမှားသွားပါတယ်..ချက်ချင်း လက်ထပ်ပါမဲ့ အကြောင်း တွေ နားငြီးလောက်အောင် ပြောလာတော့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း စိတ်မနာဖြစ်တော့…။
တစ်ရှက်ကနေ နှစ်ရှက်လဲ အဖြစ်မခံနိုင်တာနဲ့ နေ့ကောင်းရက်သာ ရွေးပြီး ဆွေမျိုးတွေကို အကြောင်းကြားဖို့နဲ့ စီစဉ်စရာ ရှိတာတွေ စီစဉ်ဖို့ ထွက်လာရင်း ခုလို ဖြစ်ရတာ…။ တကယ်ဆို ဦးထွဋ်ကျော် ပယောဂ မကင်း…။
ပြီးတော့ ဟိုဟာ….သူ ဟိုဟာလုပ်တဲ့ နေ့ကလဲ အတော်ခံလိုက်ရတယ်..။ ပေါင်ကြီး တန်းပြီး လမ်းတောင် ကောင်းကောင်း လျှောက်လို့ မရချင်…။ နောက်ပြီးတော့ ဟိုဟာ အရည်ကလဲ မထွက်…။ မထွက်တော့ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဖာသာ ပွတ်သပ်မှပဲ ပြိးတော့တယ်…။ ဘာများကောင်းတာရှိလို့လဲ…။ အိမ်ထောင်သည် သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ သွယ်မာတင် ..၊ ဒီကောင်မ ပြောဖူးတာတော့ သိပ်ကောင်းတယ် ဆိုပဲ…။တိမ်တွေထဲမှာ လှိုင်းစီနေရသလိုပဲ..တဲ့။ ခုတော့ နာတာပဲ ရှိတယ်..။ ဘာကောင်းလဲ…။ သွယ်မာတင် ငလိမ်မ…။ ဒီငတိမက မိုးကုတ်က တရုတ်မ..။ လီး သိပ်ကြိုက်တယ်..။ လက်လီတောင် ဝယ်စားဖူးတယ်..တဲ့။ သူ့အပြော အရဆိုရင် သူ့အိမ်က ဒရိုင်ဘာနဲ့ တောင် မလွတ်ဘူးတဲ့…။ အခုဟာက သူအညွှန်းကောင်းလို့စိတ်ပါမိတာလဲ ပါတယ်..။ သွယ်မာတင်က ယောက်ျားရှိလို့ပဲ လီး အရသာကို ကောင်းကောင်သိနေတာလား..။ ဝယ်စားဖို့တော့ စိတ်မကူးဝံ့.။ ကိုယ့်ဖာသာ အာသာဖြေမိတာတောင် ရှက်မိတဲ့ ဟာကို…း။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ပါကင်လေး ပွင့်သွားပြီ…။ တစ်လကျော်ခဲ့ပြီး ကိုထွဋ်ကျော်ကိုလဲ အနားကပ် မခံတော့တာက လွဲလို့ ပုံမှန် ဆက်ဆံပါတယ်…။ ဟိုး အရင် ကလဲ ခဏခဏ တောင်းဖူးလို့ ပါးကိုင်ခွင့် တို့၊ လက်နမ်းခွင့်တို့ ပေးဖူးပါတယ်..။ နို့ကိုတော့ အကိုင်မခံ..။ မလှတော့မှာ..၊ ရင်သားတွေ တွဲကျပြိး ပုံပျက်သွားမှာကို သိပ်ကြောက်တယ်..။ ပြီးတော့ ရီးစားမှ မဟုတ်တာပဲ..။ အခုတော့ သူဆတ်ဆော့တာ ကြည့်ဦး…။
ကျွန်းတစ်ကျွန်းထဲမှာ ကုလားတစ်ကောင်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ..။ တော်ကြာ ဟိုက မဟားဒယား ထလုပ်ရင် ဘယ့်နှယ့် လုပ်မလဲ..။ ဟိုက နဂိုကတည်းကမှ စိတ်ထက်သန်နေတာ…… မဖြစ်ဘူး….မဖြစ်ဘူး….တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှ ဖြစ်မယ်….။
မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ နိုးလာတော့ ညနေ စောင်းနေပြီ…။ ကုလား ကတော့ ချွေးသံ တရွှဲရွှဲ နံရိုး အပြိုင်းပြိုင်း နဲ့ ညနေစာ အတွက် ကျောက်ဆောင်ကြားက ငါးတွေကို ၀ါးချွန်နဲ့ ထိုးနေလေရဲ့…..။
“ခင်ဗျားနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ…၊ ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေ…အသံစုတ်ကြီးနဲ့ ငါးတွေ ထွက်ပြေးကုန်မယ်….“
မနေနိုင်မထိုင်နိုင် စပ်စုမိတဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဆောင့်ကြိး အောင့်ကြီးနဲ့ ဖင်ထိုင်ချလိုက်သည်..။
ဒီကုလားနဲ့ တော့ စောက်ကြောကို မတည့်.။ နေပစေ..ငါကမိန်းမသားပဲ ငါးရလာမှ အဆင်သင့် ဇိမ်နဲ့ ကောက်စားလိုက်ရုံပေါ့။ အင်း…လေ….သူလဲ တစ်ယောက်ထဲ လုပ်နေရတာ ပင်ပန်းမှာပဲ…..။
ဟော မထိဘူး…ဟောဒီတစ်ချက်တော့ ထိပြီ…ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကုလားလုပ်ပုံကိုင်ပုံ ကိုကြည့်ရင်း စိတ်ထဲကနေ ချီးကျူးမိတယ်..။ အင်း….သူရှိလို့သာပဲ ငါတစ်ယောက်ထဲသာဆို ဂဏန်းလုံးတွေပဲ အစိမ်းစားနေရမလား။ ငါးတွေပဲ အရှင်လတ်လတ် မြိုချနေရမလား မသိဘူး…။
ကုလား ငါး ခြောက်ကောင်လောက် အရမှာ လက်စသတ်လိုက်တယ်..။
“ထင်း…ထင်း…သွားကောက်၊ နေ့လည်က နေပူနေတော့ ထင်းခြောက်တွှေ ရမှာပဲ များများသာကောက်ခဲ့..“
ဟုတ်တာပေါ့..။ ငါလဲ နိုင်သလောက် လုပ်ကူသင့်တာပေါ့..။ မြိုမှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို စာသင်စာပြပြီး ကားလေးစီးလိုက်၊ ကြော့ကြော့လေး လာလိုက်၊ ရွရွလေး နေလိုက်နဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းခဲ့တဲ့ ဆရာမကြီး…ပညာတတ်မကြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဒီရောက်မှပဲ ထင်းကောက်သမ လုံးလုံး ဖြစ်ရချေပြီ…။
“ဒါပေါ့ဗျ…မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် ဆိုလား……“
စကားအသွားအလာတွေက မူမမှန်ချင်…။ စိတ်မချစွာ နောက်လှည့်ကြည့်တော့ သူမဖင်ကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး တံတွေး နင်နေတဲ့ ကုလားကို မိပါလေရော…။ ဘောင်းဘီကလဲ ရေခြောက်နေပြီ ဆိုတော့ တင်းပြီး ကားနေတဲ့ ဖင်သား အတုံးကြီးတွေက ကောက်ညှင်းထုပ်ကြီးတွေလို လုံးခနဲ ခဲခနဲ…။
နောက်တစ်ခေါက် ထင်းကောက်က ပြန်လာတော့ ကုလားက မီးမွှေးနေပြီ…။ ဒေါ်သက်ထားဝင် အရိပ်အခြေ ကြည့်နေတယ်…။ ပြီး ဓါးကို ဆတ်ခနဲ ကောက်ကိုင်ကာ
ကုလား တစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီး တံစို့မှာ ငါးကို သီတယ်…။
“နင်….ခွေးစကားတွေ ထပ်ထပ်ပြောမနေနဲ့…။ ရီးတီးရားတား လုပ်လို့ကတော့ အသက်ချင်း လဲ ပစ်လိုက်မယ်….သိလား..“
“ဟား ဟား..ခင်ဗျားကို လုပ်ချင်မှဖြင့် တွေ့ကထဲက လုပ်တယ်…“
“ဟုတ်တယ်…ခင်ဗျားဖင်ကြီးတွေကို ကျုပ် လိုးချင်နေတာ ကြာပြီ ။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်မှာတော့ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်..။ခင်ဗျား နားလည်ရဲ့လား…။ ဒါ မြို့ မဟုတ်ဘူး…ခင်ဗျား အခု ကျုပ်ကို သတ်ပါပြီတဲ့…ခင်ဗျားကို ဘယ်သူက အစာရှာကျွေးမလဲ..“
“တော်စမ်းပါ…..ကဲပါလေ..ထားပါတော့ ရှာစားလို့ ရပါပြီတဲ့ ခင်ဗျား တစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လိုနေမလဲ….ကျုပ်ကလဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သေတာဆိုတော့ အစိမ်းသေပေါ့…ဒီလိုဆိုရင် ကျွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး…“
“ကျုပ်က ဥပမာ ပြောတာပါ.. ခင်ဗျား ကျုပ်ကို မယုံရင် ဓါးယူထား..။ ကျုပ်လိုရင် ပြန်တောင်းမယ်..ကဲ..ကဲ..မှုတ်တော့…မှုတ်တော့…“
“ဆရာမားကလဲ တလွဲတွေ လျှောက်တွေးပြန်ပြီ …မီးတောက်အောင် မှုတ်ခိုင်းတာ….“
တကယ်ပါပဲ…စောက်ကုလားနဲ့ကတော့…ဘယ်လိုလုပ်ရှေ့ခရီး ဆက်သွားမလဲ..။ဘယ်လိုမှ ကီးကိုက်လိမ့်မယ်..မထင်..။ စားသောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် စကားမပြောဖြစ်ကြ..။ မိုးကချုပ်လာပြီ…။
“ ဆရာမား…အပေါ့ သွားဦးမလား…“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရှက်သွေးများ နီရဲပြီး အသံကျယ်ကြီးနဲ့ အော်ပြောတယ်…။
“မဟုတ်ဘူး…ကျုပ်ထင်းသွားကောက်မလို့…တော်ကြာ မီးဖိုပြီး အိပ်ရမှာ….“
သူ့ဆင်ခြေနဲ့ သူကျတော့လဲ ရေပက်မဝင်အောင် မှန်နေပြန်ရော…။ မီးပုံကို အလယ်မှာထားလို့ ဟိုဘက်ဒီဘက် အိပ်ကြရတယ်…။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း တော်တော်နဲက အိပ်မပျော်။ ကုလားကတော့ တစ်ခါထဲ ခေါင်းစိုက်တာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ် ထင်ပါရဲ့..။ တစ်နေကုန် အလုပ် ပင်ပန်းလို့ နဲ့တူတယ်..ဟောက်တောင် ဟောက်နေပြီ ..။ သူမကသာ မျက်စိတွေ ကြောင်ပြီး အိပ်မရ..။ ဟိုဘက်စောင်းလိုက် ဒီဘက်လှည့်လိုက်၊ မီးပုံဘက် ပြန်လှည့်လိုက်နဲ့….။
မရည်ရွယ်ပဲ မျက်စိက ရောက်သွားပါတယ်..။ ဘောင်းဘီအစုတ် ဝတ်ထားတာတောင် ကြည့်ပါဦး.. ။ သူ့ဟာကြီးကလဲ ဖုထစ်နေလိုက်တာ….ဟုတ်ပါတယ်…ကုလားပေါင်ကြားမှာ ဖုဖုဖောင်းဖောင်ကြီး…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရင်ဖို စိတ်လှုပ်ရှားသွားမိသည်..။ မကြည့်ရဲပဲ မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်..။ မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့..။ အဲ…လူ့စိတ်ဆိုတာ က အခက်သားလား…. မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အရာကို လုပ်ချင်တယ်..။ အခုလဲ မကြည့်ပါနဲ့လို့ အရှက်တရားက တားထားတဲ့ အရာကိုမှ ကြည့်ချင်တယ်..။
အသက်ရှူလိုက်တိုင်း ဖောင်းတက်လာလိုက် ၊ပြန်နိမ့်ကျသွားလိုက် နဲ့ အဲဒီအရာကြီး…ဘာကြီးလဲဆိုတာ ရှက်ရွံ့စွာ နားလည်တယ်..။ ကြည့်ပါဦး…ချက်ကအမွှေးတွေကလဲ ဝမ်းဗိုက်အထိတောင် တွယ်ဆက် ပေါက်ပွားနေလိုက်တာ..ရိုးမတောတန်းကြီးလို နိမ့်ပြီး ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ အောက်ထဲ ဆင်းသွားတယ်…။ ရင်ဘတ်ကနေ အောက်အထိ အမွှေးကြမ်းကြမ်းတွေ မဲမဲသဲသဲ ရောနေတယ် ထင်ပါရဲ့..။အသဲယားလာမိတယ်…။ ဘာလို့ အသဲယားမိမှန်းတော့ နားမလည်…။
မဆီမဆိုင် သွယ်မာတင်ကို သတိရမိတယ်..။ အိမ်မှာ အဒေါ်တစ်ယောက်ထဲ ငါ့ကို စိတ်အရမ်းပူနေမလား သတိမရပဲ …ဒီဏှာဗူးမကိုမှ တွေးမိတယ်..။ ကောင်မသာ ငါ့နေရာမှာဆိုရင် ပွဲပဲ..။ ဟုတ်တယ်…ဒီကောင်မက သူ့ဒရိုင်ဘာ အိပ်ပျော်နေတုံး အပေါ်ကနေ သွားပြီး ဟိုပွတ်ဒီပွတ် ဟိုကိုင် ဒီကိုင် လုပ်တော့ ဟိုကလန့်နိုးလာပြီး အလုပ်ရှင်ရော ဘာသော နားမလည်နေတော့ပဲ ကောက်တီးလိုက်တာဆိုပဲ….။
အို……..ငါ ဘာတွေ တွေးနေမိပါလိမ့်…။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ခမျာ ပေါင်ကြားထဲ လက်ထည့်ပြီး အတင်းဇွတ်ကြိတ်မှိတ် အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားရပါတော့တယ်…။
မိုးစင်စင်လင်းပြီးမှ နိုးလာတယ်..။ ဘေးလှည့်ကြည့်တော့ ကုလား ကို မတွေ့..။ မီးဖိုကလေးက မီးကြွင်းမီးကျန် အနံ့တွေတောင် ငြိမ်းသေသွားပြီ…။
“အင်း…ဟိုကောင် ငါးရှာနေရောပေါ့..ငါ နဲနဲပါးပါး သွားကူဦးမှပဲ..“
ပင်လယ်ရေနဲ့ ကမန်းကတန်း မျက်နှာသစ်ပြီး…ကျောက်ဆောင်ဘက် ထွက်လာခဲ့တယ်..။
မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ချက်ချင်းပဲ ချုံပုတ်တွေနောက် ဝင်ပုန်းမိတယ်..။ ကုလားက သူ့ကိုမမြင်..။ သူမ အိပ်နေတုန်းပဲဟု စိတ်ချလက်ချ ယုံကြည်ထားခဲ့ပုံ ရတယ်…ထင်ပါရဲ့..။ ကြည့်ပါဦး လုပ်နေတဲ့ပုံကိုလဲ…သူတစ်ကိုယ်လုံးမှာ အဝတ်အစားတွေ မရှိဘူး…။ ဘောင်းဘီအစုတ်ကလေးကလဲ ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ လှမ်းထားတယ် ထင်ပါရဲ့..။
ပြီး..ပြီးတော ဖင်ကြီးကို မည်း.လို့…ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီး ..။ ပေါင်လည်လောက်ရှိတဲ့ ရေစပ်မှာ လက်တစ်ဖက်က ရေကိုခပ်လိုက်၊ နောက် ..နောက်လက်တစ်ဖက်က သူ့ဟာကြီးကို ကိုင်ပြီး အထက်အောင် ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ မြင်ကွင်း…။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကြက်သေ သေပြီး အသံတစ်ချက်မှ မထွက်ပဲ ကုလား ဒုတ်ကြီးကို ကြည့်နေမိသည်..။ နဲနဲနောနော ဟာကြီးမှ မဟုတ်တာ… ဟို…ဟို သူ့ထိပ်ဝကြီးက ကျောင်းမှာ သင်ပုန်းဖျက်တဲ့ ဘောဖျက်လောက်ကို ရှိတယ်..။ ပြီးတော့ မဲမဲကြီး….။ နေရောင်အောက်မှာ ဆိုတော့ သပိတ်ရောင်ထလို့ လက်ခနဲလက်ခနဲ တောက်နေတာ..။ တကယ့်ကို မှိုပွင့် မဲမဲကြီးလို..။ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကြောက်သွားတယ်..။ ကြက်သီးတွေ ဖြန်းဖြန်းထပြီး ရှိန်းတိန်း ဖိန်းတိန်း ဝေဒနာ တစ်မျိုး ခံစားရတယ်..။ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ဒီတစ်ခါပဲ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဂွင်းတိုက်နေတာကို ခိုးကြည့်ဖူးတာ..။ လက်နဲ့ ကွယ်နေတော့ သူ့ဟာကြီး အရှည်ကိုတော့ မတွေ့ရ..။ တော်တော်တော့ ရှည်မှာ အမှန်ပဲ..။
သူမကို မုဒိန်းကျင့်သွားတဲ့ ဦးထွဋ်ကျော်ဟာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်..။ ဦးထွဋ်ကျော်ဟာက်ို ခိုးကြည့်မိတုံးက လေးလက်မလောက်ရှိမယ်လို့ ထင်ရတယ်..။ အခု ကုလားဟာကို မမှီ..။ ဆီနဲ့ရေ၊ နံ့သာဆီ နဲ့ အီးလို ကွာလှတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း တံတွေးတွေ ဘာတွေပင် သီးသွားရတယ်..။
အားမလို အားမရနဲ့ ရှေ့နား နဲနဲ တိုးကြည့်မိတယ်..။ မြင်ကွင်းက ပိုပြီး ရှင်းလင်းလာတယ်..။ ပြတ်သား ကြည်လင်လာတယ်..။ ကုလားကတော့ ဘာမှ သိပုံမရ..။ ဆရာမရှိတဲ့ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး မျက်လုံးကြီး စုံမှိတ်လို့..ပယ်ပယ်နယ်နယ် အစာကြွေးနေလေရဲ့..။ ထုလေမာလေ..တိုက်လေထွားလေဆိုတာ မျိုးလား တော့ မသိ..။ ကုလား လီးချောင်းကြီးက ထွားကြိုင်း သန်မာပြီး ကြီးလာ မာလာလိုက်တာများ…ငရုတ်ကျည်ပွေ့ ကြီးနဲ့ နင်လားငါလား ဖြစ်လာတယ်..။
ကြည်ရင်းနဲ့ ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်း တစ်ကိုယ်လုံး ပူထူလာတယ်..။ အဲဒါကြီးနဲ့ အလုပ်ခံရမဲ့မိန်းမတော့ သေမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကလဲ ယောက်ယက်ခတ်တွေးတောလို့ အပျို တင်းပြည့်မကြီးကို လီးမည်းကြီးက ညှို့ငင်နေတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း အဖို့ စာအုပ်တွေ၊ ဗီဒီယို တွေထဲမှာ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ နီဂရိုးကြီးတွေရဲ့လီမည်းကြီးတွေလို စံချိန်မှီလှသော ကုလား ပဲကိုး…။ ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲ ကြောက်လာမိတယ်..။
ကုလားကတော့ ဘာမှ မသိရှာ.။ အတန်ကြာ ဆက်တိုက် ဂွင်းထုပြီး ငေါက်ခနဲ ငေါက်ခနဲ ဖြစ်ကာ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တယ်..။
ငါ အိပ်နေတဲ့ဘက်ကို လှည့်ပြီး ထုတာဆိုတော့ ငါ့ကိုများ …အို……..မတွေးရဲ….ဆက်မတွေးရဲ။ ကျောရိုးထဲကနေ စိမ့်ခနဲ နေအောင် ထိတ်လန့်သွားရှာမိတယ်..။ ချက်ချင်းပဲ ပြန်လာပြီး အိပ်ရာမှာ ဟန်မပျက် မှိန်းနေလိုက်တယ်..။ ကုလား ရေဆေး ဘောင်းဘီဝတ်ပြီး ..ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ရောက်ချလာသည်…။
“နာမယ် ဖျားမယ် မကြံနဲ့..။ ဆေးမရှိဘူး ..ကိုယ်ဖာသာ ကြံဖန်ပြီး ချွေးထွက်အောင်နေ…“
သြော်….နင်ကတော့ ချွေးရောသွေးရော ထွက်ခဲ့ပြီးပြီ ကိုး…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း စိတ်ထဲမှ ကြိတ်ပြောရင်း ထရပ်တယ်…။
“ ဟာ…ဟိုမှာ ဟိုမှာ……..“
ကုလား ဝမ်းသာအားရ ကမ်းစပ်ဘက် လက်ညှိုးထိုး ခုန်ပေါက်ပြေးဆင်းသွားတယ်..။ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ရေပေါ်မှာ ပေါလောပေါလောနဲ့ ပျဉ်ချပ်တစ်ချပ်..။ အဲ…မဟုတ်.. မဟုတ်သေးပါဘူး…။ သစ်သားပုံး ထင်းရှူး သစ်သားပုံး တစ်လုံး မမျောပြိး ရေလှိုင်းကြား ကမ်းစပ်နားမှာ ရစ်ဝဲရစ်ဝဲ ဖြစ်နေတယ်..။
“ အရက်တစ်လုံး ပါတယ်..“
“စောက်ရေးထဲ စောက်အရက်သမားက တစ်မျိုး..“
အနားရောက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ပါတော့ပါသည်..။ အမယ်စုံပါ ပဲ..။ သေငယ်ဇောနဲ့မုန်တိုင်းမိတဲ့ အချိန်မှာ ထည့်မိထည့်ရာ တွေ ကောက်ထည့်လိုက်တော့ ပါတဲ့ဟာတွေက ကပေါက်ကချောက် ဟိုရောက်ဒီရောက်..။ နောက် ..ဆပ်ပြာမွှေးတစ်တုံး ..ဒါတော့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း သဘောကျသွားတယ်..။ ပြီးတော့ သွားတိုက်ဆေးဘူး၊ ကော်ဖီမစ် တစ်တွဲ၊ ပြီး ဂါဝန်တစ်ထည်… ဆယ်နှစ်သမီးလောက် အရွယ်ဝတ် ဂါဝန်မျိုး …နံငယ်ပိုင်းသာသာ ပုဆိုးတစ်ထည်….အင်း…ဒါလဲ မဆိုး ရေလဲ လုပ်လို့ရတယ်..။ ဒန်ချိုင့် တစ်လုံး..ဒါလဲ ရေနွေး ကျိုဖို့..။ ပြီးတော့ ကြိုးတစ်ချောင်း..တော်တော်ကြီးသည်..။ နိုင်လွန်အလုံးကြိး အသုံးဝင်မှာပဲ အောက်ဆုံးမှာက သားရေတာလပတ် အထူကြီး..။
“တာလပတ် တစ်ခုပဲ အသုံးမဝင်တာ…“
“ ခင်ဗျားကလဲ..တုံးပါ့..ရွက်ဖျင်တဲ လုပ်လို့ရတာပေါ့ဗျ. ။ အခင်းရော အခြုံရော ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်..။“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကုလားကို ဘုကြည့် ကြည့်ပြီး ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘူး..။ ကျောက်ဆောင်ဘက် ထွက်လာခဲ့ပြီး ငါးကင်တွေကိုသာ တိတ်တဆိတ် စားပြီး မနက်စာ တစ်နပ်ကို ငြိမ်းသတ်လိုကရတယ်…။
စားသာစားနေရတာ..မျက်လုံးထဲမှာ ဟိုဟာကြီးကမထွက်… ဘာကြီးလဲ ဘာကြီးလို့ ပြောရမလဲ..ရာဘာဒုတ်ကြီးလို့ပဲ ကင်ပွန်းတပ်ရမလား.. ဟုတ်ပြီ မြင်း…..မြင်းလီးကြီးလို့ပဲ ဥပမာ ပေးရမှာပဲ..။ ယုံနိုင်စရာတောင် မရှိ..။ ဒီလောက် ပိန်ခြောက်ခြောက်ကောင် အရိုးပြိုင်းပြိုင်းကောင်းဆီမှာ ဒီလို ထွားထွား ကြိုင်းကြိုင်းကြီး တစ်ချောင်း ရှိတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်စရာပဲ…။ အင်း…လောကကြီးက လူတွေကို တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ အသုံးဝင်ဖို့ ပေးပြီးသားဆိုတာ တယ်မှန်တာပဲ…။
ကုလားကတော့ ရွက်ဖျင်တဲ တစ်လုံးရတော့ မှာမို့ ပျော်နေသည်..။
“အတော်ပဲ ဗျ…ဒီည မိုးရွာနိုင်တယ်.. တဲထဲ မှာ အိပ်ရမယ်…“
“ အို…ကျွန်မ ရှင်နဲ့ အတူမအိပ်ပါဘူး….“
“မအိပ်လဲ ..ခင်ဗျား အပြင်ထွက်အိပ်ပေါ့….“
ကြည့် တကယ့် ဘုဂွစာ..။ ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင် ခွေကုလားကို ပါးရှစ်စိတ်ကွဲအောင် ရိုက်ပြီးပြီ..။ ကုလား လှည့်မကြည့်တော့ ..ရွက်ဖျင်တဲကြီးကို အားချင်း ဆင်ဖို့ပြင်တယ်..။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေကုန်ရတယ်..။ညနေစာ စားပြီးတော့ တစ်ယောက်ထဲ ငူငူကြီး ထိုင်နေတုံး ကုလား ရောက်လာတယ်…။
“သောက်ပါ စိတ်ကောက်မနေပါနဲ့ ဆရာမား..“
သည်လိုဆိုတော့လည်း မဆိုး..။ ဒါနဲ့ ကော်ဖီတစ်ငုံ သောက်လိုက်ရတယ်..။
“ဟုတ်တယ်လေ…တစ်ထုတ်ကို နှစ်ယောက်သောက်တာ…ရက်ကလဲ ဘယ်လောက်ကြာမယ်မှန်း သိတာမဟုတ်ဘူး..“
“ရှင်ကလဲ ကတ်စေး နဲနေပြန်ပါပြီး….“
“ဒီမှာ ဆရာမားနဲ့ကျုပ် နှစ်ယောက်ရှိတာပဲ..။ဒီဟာတွေကို တစ်ယောက်တစ်ဝက်ပိုင်တယ်။ ဆရာမားသောက်ချင်ရင် ထပ်ဖျော်ပေါ့..ကျုပ်က စေတနာနဲ့….“
ကပ်စေးနဲတယ် ပြောတော့ မခံချင်..။ ဘုဆတ်ဆတ် ပြောပြီး လှည့်ထွက်သွားတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကြိတ်ပြုံးမိတယ်။
ညရောက်လာတော့ သူဆောက်ထားတဲ့ ရွက်ဖျင်တဲ ပုံစံလေးက သိပ်မဆိုးပါ..။ တကယ်ဆောက်ပြီးပြန်းတော့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဒီအထဲမှာ လွပ်လွပ်လပ်လပ် လုံခြုံစွာ အိပ်ချင်မိပြန်ရော…။
“နှစ်…..နှစ်ယောက် အတူတူ အိပ်မယ်လေ…“
ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ ဖိတ်ခေါ်တော့လဲ ငြင်းတယ်…။ စိတ်လဲ သိပ်ကြည်ပုံ မရသေး…။ အရက်ပုလင်းကို ဖွင့် တစ်ငုံကျော်ကျော်သောက်လိုက်တယ်…
ပြီးတော့ မီးပုံဘေးလှဲချလိုက်တယ်..။ ချက်ချင်းပဲ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ အားကျစရာတောင် ကောင်းသေးတယ်…။
သူ့ကျတော့လဲ အပူအပင် မရှိသလိုပဲ အိပ်ပျော်တာ မြန်လိုက်တာ.။ အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေတာက သူမ..။ အိပ်မပျော်နိုင်စရာ အကြောင်းကလဲ ရှိနှင့်နေတော့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသွားရတယ်..။ ယောက်ယက်ခတ်ဖြစ်ရတယ်..။ တခြားမဟုတ်.. မနက်တုံးက မှိုပွင့်ကြီး….အဲ…အဲ မြင်းလီးကြီးကို မျက်စိထဲ မြင်ယောက်မိနေပြီး အိပ်လို့မရ …။ ညကြီးမင်းကြီး ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်နေရှာတယ်…။
တစ်ခါမြင်ဖူးထားပေမဲ့ ထပ်မြင်ချင်မိသေးတယ်..။ သွယ်မာတင် ကဲသလို အိပ်ပျော်နေတုံး သွားလှန်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား..စဉ်းစားမိတော့ ရှက်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း…။ တော်ကြာ ဟိုက နိုးလာပြီး ဟင်း……. ဒီမျက်နှာ ဘယ်သွားထားရမယ်မှန်း မသိ။ နောက်ပြီး သူဝတ်ထားတာက ဘောင်းဘီ ဆိုတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ချွတ်လို့မရ လှန်လို့မရ..နဲ့မို့။ သူ့ဟာမမြင်ရရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ချွတ်မယ်..။ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ပဲ ဘောင်းဘီဇစ်ကလေးကို အသံမမြည်အောင် ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်..။ ကသောင်းကနင်းစိတ်တွေကိုလဲ မကျေနပ်ချင်။ အရှက် သည်းမိပြန်တယ်..။ လက်ညှိုးလေး ထည့်ပြီး ကိုယ့်ဟာ ပူပူနွေးနွေးကလေးကိုပဲ ပွတ်နေလိုက်တယ်..။ အို….ဘာဖြစ်လဲ .သူတောင်မှ ဂွင်းတိုက်သေးတာပဲ..။
ပါကင် ဖွင့်ပြီးစ အဖုတ်ကလေးတွေဟာ ဒီလိုပဲ စိတ်ထတတ်သလားမသိ..။ ဦးထွဋ်ကျော် ဖွင့်ပြီးသွားစနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ကဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးထွဋ်ကျော်ဆီ ပြေးပြီး ကုန်းလိုက်ချင်စိတ်များပင် တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတယ်..။ အဲဒီတုန်းက အဖုတ်ကြီးက ဖားဂုံညှင်းကြီး လိုကြီးမားဖောင်းကား ဝင်းလဲ့ရင်း အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ကျလာခဲ့ဖူးတာ..။ အရှက်တို့ စည်းတို့ ဆင်ခြင်တုံ့တရားတို့သာ မရှိတော့ရင် လူတွေဘာဖြစ်ကုန်မလဲ မသိ။ အခုလဲ လူတကာက ရိုသေလေးစားကြပြီး ၊ တပည့်လေးတွေက ချစ်ကြောက်ကြတဲ့ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်းတစ်ယောက် ကြိတ်မှိတ် ပြီး စိတ်ဖြေသိမ့် နေရပါတယ်..။
မနက်စာ စားပြီးကတည်းက တစ်ညလုံး မှက်ခြင်တောထဲမှာ ပေတေပြီး အိပ်ခဲ့တဲ့ ကုလားကို နှိုးပြီး ရွက်ဖျင်တဲ ထဲမှာ သွားအိပ်ခိုင်းလိုက်တယ်..။ ဒီတစ်ခါတော့ ကုလား ပဲ မများတော့..။ ညနေစောင်းရင် နှိုးဟု မှာပြီး တချိုးတည်း စက်တော်ခေါ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ထွက်လာခဲ့တယ်..။ ခဏတဖြုတ်နေပြီး …စောစောစီးစီးပဲ ငါးထိုးလိုက်တယ်..။ မသာကောင် …နင်တစ်ယောက်ထဲ လုပ်တတ်တာ မဟုတ်ဖူး..။ ငါ ငယ်ငယ်ကတည်းက မော်လမြိုင်မှာ နေကထဲက ဒါတွေ ကျွမ်းပြီးသား..။ မခံချင်စိတ်ကြောင့်ပဲလား ဘာလားတော့မသိ..။ ငါးခုနစ်ကောင်လောက်ရတယ်..။
ငါးတွေကို ဒီအတိုင်းထားပြီး အဝတ်အစားတွေချွတ် ၊ ဆပ်ပြာမွှေးနဲ့ ရေမိုးချိုး သေသေချာချာ ပွတ်သပ် သန့်စင်လိုက်တော့ နှစ်ရက်ကျော် ရေမချိုးပဲ နေခဲ့ရတဲ့ စိတ်ကလေး ကြည်လင်လန်းဆန်းလာတယ်..။ အဲ….အားလုံးပြီးတော့မှ ပြသနာက စတာပဲ..။ ဂါဝန်… ဘယ်လိုမှ မတော်..။ မတော်မှန်းတော့ သိတယ်။ ခုလောက်တိုမယ်လို့တော့ မထင်.။ ပေါင်လည်သာသာလောက်ပဲ ရှိတယ်..။ ရေစိုနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုလဲ လျှော်ဖွပ် လှမ်းပြီးပြီ..။ ဘာလုပ်ရမည်မှန်း မသိ..။ချီတုံချတုံ..။ပြီးတော့ ဂါဝန်ကလေးက ပါးလွန်းတယ်..။ ပါးတာမှ နေရောင်ထဲမှာ မို့လိုပဲ ဒီလောက်ပါးတာလား..။ အခုမှ လျှော်ပြီးစ အဝတ်တွေတော့ ပြန်မဝတ်ချင်..။ အောက်ခံ တစ်ခုမှ မပါတော့လဲ ခက်တယ်..။ ဟယ်…ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ စိတ်အားတင်းလိုက်တယ်…။
အမြဲတမ်း လက်ရှည်များနဲ့ လုံလုံခြုံခြုံ နှစ်ထပ်သုံးထပ် ဝတ်လာခဲ့တဲ့ အပျိုမကြီးအတွက် ဂါဝန်တိုနံ့နံ့ကလေးက မလုံမလဲနဲ့ ကလက်တက်တက် နိုင်လွန်းသလိုလို..ထင်ရတယ်…။
ခဏပါပဲ..။ ရေထဲကနေတက်လာတော့ ဂါဝန် အကြောင်း မေ့သွားတယ်..။ ငါးတွေ… ဒီငါးတွေကို ကင်ဖို့ရှိသေးတယ်လေ..။ ဒါနဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှလူတွေ လုပ်စားသလို ရွှံ့ခူးပြီး ရွှံ့နဲ့ပဲ လေလုံအောင် ပိတ်ပြီး ခုနစ်ကောင်လုံး မီးဖုတ်လိုက်တယ်..။ မီပုံ နှစ်ဖို ဖို၊ တစ်ဖိုမှာ ရေနွေးကျို ၊ တစ်ဖိုမှာ ငါးမီးဖုတ်..။
“ဘာတွေများ အလုပ်များ…. အမ်မလေး ကုန်ပါပြီ….“
“ခင်ဗျားကို ဘယ်ရွှေဉာဏ်တော် စူးရောက်ပြီး မီးပုံ နှစ်ဖို ဖိုရတာလဲ “
“ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရေနွေးကျိုဖို့ရယ်..၊ ငါးကင်ဖို့ရယ်လေ..“
“တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုလုပ်လဲ ရတာပဲ…သက်သက်ထင်း ကုန်အောင်…“
“အောင်မာ..တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုလုပ်လဲ ဒီထင်းပဲ…ရှင်…စောက်စကားကိုများတယ်…“
ကုလား ဘာမှ ပြန်မပြော။ ကမ်းစပ်မှာ မျက်နှာသွားသစ်တယ်..။ ရေလဲ ပုဆိုးလေး ဘေးချပြီး ရေဆင်ချိုးတယ်.။ အကြာကြီးပဲ…ဒေါ်သက်ထားဝင်းလို အသားဖြူချင်လို့လားမသိဘူး။ ရေချိုးရာကနေ တက်လာတော့ ရေနွေးလဲ ဆူပြီး ငါးကင်လဲ ကျက်ပြီ..။ မလုံမလဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်းကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး ငါးကင်ကြောင့် ဖြစ်သလိုလိုနဲ့ …တံတွေး မြိုချတယ်..။
ရွှေရင်နှစ်မွှာ ရေးတေးတေး လေးနဲ့ဆိုတာ သိလို့ ဒီလောက် ပုဆစ်တုပ်ထိုင်နေတာတောင် ကြည့်ရက်တဲ့ကောင်။
ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ပြောရင်း မျက်လွှာချပြီး မရည်ရွယ်ပဲ ကုလားကို တစ်ချက် ခိုးကြည့်မိတယ်..။
“ဟို…ဟို အုန်းသီးတွေလေ နုလဲနု ထွားလဲထွား စားချင်စရာကြီး…“
မော့ကြည့်လိုက်တော့ အုန်းပင်က အုန်းသီးက သစ်တော်သီး လောက်ပဲ ရှိသေးတာ..။
“ကဲပါ စားကြရအောင် မိုးချုပ်လာတော့မယ်“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရင်ကလေး ကော့ပြီး မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ပြတယ်..။ စောက်ကုလား နင်မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်တော့ဘူး မဟုတ်လား..။
“ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်များတာ ငါးကောင်ဆို တော်ရောပေါ့…တော်ကြာ အဲဒီနေရာကို ငါးတွေ မလာတော့ရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ…“
“ကိုယ့်ပေါင်ပဲ ကိုယ်လှီးစားပေါ့ သေချင်းဆိုးရဲ့…ဒီလောက် မောကြီးပန်းကြီး လုပ်ပေးတာကို ကဲ့ရဲ့သေးတယ်..။ ပင်လယ်ထဲက ငါးတောင်မှ ကပ်စေနဲတဲ့ လူကရှိသေး“
“ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ် အကြောကို မတဲ့ပါဘူးဗျာ..“
မတဲ့နေပေါ့..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း စောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ဆက်မပြောဘူး…။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ချုပ်ညနေ ဆည်းဆာခင်း ကိုရောက်လာတယ်..။
“မသောက်ဘူး၊ အဲဒီ ငါးကင်တစ်ကောင်ပေး..“
ငါးမီးဖုတ်ကို တံစို့နဲ့ ထိုးပြီး ကုလား ထွက်သွားတယ်..။ သိမ်းဆည်းစရာ ရှိတာတွေ သိမ်းပြီး ကော်ဖီလေး အရသာ ခံသောက်ပြီး အိပ်ဖို့ပြင်ရတယ်..။ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒီအလုပ်ပဲ ရှိတာ ..စားပြီးအိပ်..၊ အိပ်ပြီးစား အဲသလို တွေးမိတော့ မျက်ရည်လည်မိတယ်..။
အိမ်ကို သတိရလိုက်တာ။ အိမ်လွမ်းလို့ ကိုယ်ကငိုမလို့ပြင်တုန်းရှိသေး..။ မိုးကောင်ကင်ကြီးက စငိုလေပြီ…။ မိုးစက်တပြောက်ပြောက်နဲ့ သစ်ရွက်ကြွေတွေပေါ် ကျလာတယ်..။ ဟဲ့…ဟိုမသာ ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်..။ မိုးသဲလာရင် သူအပြင်မှာ အိပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး..။
အောင်မာ…ကြည့်စမ်း….ငတိက သောက်ပြင်မှာ အရက်တစ်ကျိုက် ၊ ငါးကင်တစ်ကိုက်နဲ့ ငြိမ့်နေလိုက်တာ။ မိုးဖွဲလေးတွေ ကျနေတာတောင် သိပုံမရ..။
“ရတယ်..အရမ်းသဲလာတော့မှ တဲထဲ ဝင်လာတော့မယ်..“
နောက်ဆုံးလက်ကျန် ငါးရိုးကို လွှတ်ပစ်လိုက်ရင်း အရက်ကို ထပ်မော့တယ်..။
“ပြင်းမှာပေါ့။ ရေမှ မရောပဲနဲ့ …အရက်ကလဲ နံလိုက်တာ…“
“အာ…အရက်ဆိုမှတော့ နံမှာပေါ့ ။ ငါးကင် ကျန်သေးလား..“
“ခင်ဗျား တော်တော်လုပ်တတ်တယ်.. စားရတာ ဂွတ်..ဂွတ်..အေ့..ဂစ်..“
လျှာလေးအာလေးကြီးနဲ့ ကုလား စကားတွေပင် မပီချင်တော့..။ မိုးက စိမ့်စိမ့် သဲလာပြီ..။
“ဘာလို့ ချန်ရမှလဲ ကျုပ်ကပ်စေးမနဲဘူး..“
စိတ်ရှုပ်ရတဲ့ အထဲမှ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ပြုံးမိတယ်..။ ကုလား ဒယီးဒယိုင်နဲ့ ထရပ်တယ်..။ မရ.။ သူကိုယ်သူ နိုင်ပုံ မရ..။
“ရဒယ်..ရဒယ် ဆရာမား နေပါစေ..အူး…အူး…“
ပြောရင်းက လဲကျလိုကနဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ထိန်းလိုက်တယ်..။ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ဒီလို ယောက်ျားသားအနီး ကို ..ကိုယ်မှစပြီး မကပ်ခဲ့ဖူးသော ဒေါ်သက်ထားဝင်းတစ်ယောက် အခုမှပင် အမူးတစ်ကောင်ကို တွဲရတဲ့ အဖြစ်က ရှက်ရွံ့ ရင်ခုန်စေတယ်..။ ဒီတော့ လုပ်မိလုပ်ရာ မတွဲတတ် မထိန်းတတ်နဲ့ ထိန်းရင်း လက်တစ်ဖက်က ကုလား ပုဆိုးထဲမှ ပူနွေးနွေးကြီးကို ကိုင်မိလျက်သား..။
ကုလားရင်ထဲမှာ ကုလားဘုရာပွဲ ဗုံတီးသံတွေထက် ဆယ်ဆလောက် ကျယ်လောင်သွားတယ်..။ အပျိုမကြီးရော ဘာထူးလို့လဲ။ အမြောက်ဆံကြိးတွေ ရင်ဝတည့်တည့်ကို ဝုန်းခနဲ ဝုန်းခနဲ လာထိမှန်သလိုပဲ..။နှလုံးသားတွေက ဝုန်ခနဲ ဒိုင်းခနဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်မို့ တွေဝေနေကာ ချက်ချင်းတောင် လက် ပြန်မရုတ်မိဘူး….။
ကုလားကလဲ ဒီညနေကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဘောင်းဘီတိုလေးကို လျှော်ထားသဖြင့် ရေလဲပုဆိုးလေး ဝတ်တားတာ သူမရှေ့တင်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရှက်သွေးတွေ ရဲတက်သွားပြီး ချက်ချင်းပဲ တွဲနေတဲ့လက်ကို ဖြုတ်ချလိုက်တယ်..။ ကုလား မနေနိုင်တော့ဘူး..။ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေ နေတဲ့ ဂါဝန်လေး အောက်က တင်သားကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး ကုလားစွန့်စားလိုက်တယ်..။
အရိပ်ပြမှ အကောင်ထင်ရှာလေသော ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကြောက်လန့်တကြား နောက်ဆုတ်တယ်…။ ကုလားကလဲ လိုက်မဆွဲ..။
အရက်ပုလင်းကို ခလုတ်တိုက်မိပြီး လဲပြိုသွားတယ်..။ အဖုံးပိတ်ထားလို့ပဲလား၊ မရှိတော့လို့ပဲလား မသိ။ ကုလားက အရက်ပုလင်းကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး…။ အာရုံက ဆရာမဆီမှာ..ဆရာမ အိုးကားကြီးတွေဆီမှာ … အတင်းချုပ်တယ်..။နှောင်တယ်။ အခြေအနေက ချက်ချင်းကို ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်သွားတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကလဲ အတင်းရုန်းတယ်..။ ပါးစပ်ကလဲ ဆဲသံဆိုသံတွေ ထွက်လာပြီ..။
ထုတယ်..ရိုက်တယ်..။မရ ။ ရုန်းတယ်..ကန်တယ် ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆရာမ မောလာရှာတယ်..။ နုနယ်တဲ့ မိန်းမသားပီပီ ခွန်အားကမမျှ။ ကုလားက လက်နှစ်ဖက်ကို အတင်းချုပ်ရင်း ပေါင်ကြားထဲ အသားလွတ်ညှောင့်ပစ်လိုက်တယ်..။
အဝတ်အစားတွေ ရှိရက်နဲက အသားလွတ်ကြီး လိုးညှောင့်တဲ့ ပုံစံ….။ ပုဆိုးနဲ့ ဂါဝန် ခံနေတဲ့ တိုင်အောင် အဲဒီလို အညှောင့်ခံရတော့ ဖြင်းခနဲ စိတ်လှုပ်ရှားကာ မသိမသာ ပေါင်ကြီးတွေ ကားပေးမိတယ်..။ အတော်ကလေး ခရီးရောက်သွားတယ်..။ ..မ.. ဗီဇအတိုင်း ဒေါ်သက်ထားဝင်းသည် ကုလား ဆီးစပ်နဲ့ သူမဆီးစပ်ကို ထိကပ်သွားအောင် ကော့တင်ပစ်လိုက်တယ်..။ ဂါဝန် တိုနံ့နံ့ရဲ့ အောက်နားစကို ကုလား လှန်တင်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ချွေးတွေ အရွှဲသားနဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်တယ်..။ ဒီတော့မှ ကုလားက လက်ကိုလွှတ်ပြီး ကိုယ်ကို အောက်ပိုင်း လျှောဆင်းလိုက်တယ်..။
မရတော့..။ ခုချိန်မှာ ကုလားကို ဘယ်သူမှ မတောင်းပန်နိုင်တော့..။ ဂါဝန်ကလေးကို လှန်တင်ပြီး တစ်ချက်လေးမှ တောင် တုံ့ဆိုင်းမနေတော့…။ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ အဖုတ် ဖောင်းဖောင်း မို့မို့ ကြီးကို သိမ်းကြုံး ယက်ပါလေရော…။
သိပ်ကောင်းတဲ့ အရသာပေါ့။ မိန်းမတိုင်းတောင် ဒီလိုကြုံဘူး ခံဘူးကြတာမဟုတ်.။ အပျိုမကြီး ထွန့်ထွန့်လူး…ခါယမ်း သွားတော့တယ်..။ ခုန မစေ့တစေ့ ပေါင်တံတွေ လုံးလုံးကားသွားပြီ…။ အရည်ကြည်လေးတွေ တစိမ့်စိမ့် ထွက်လာပြိး မနေနိုင်မထိုင်နိုင်လွန်းစွာ သဲမှုန့်လေးတွေကို လက်နဲ့ ဖျစ်ညှစ် ဆုတ်ချေထားမိလေရဲ့..။ စိတ်တွေလဲ မထိန်းနိုင် တော့ဘူး…။
မပြောမဆို ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြိး ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် လျက်လိုက်တဲ့ လျှာက ကြမ်းလွန်းလှချည်ရဲ့..။ လျှာစောင်းက ထူလဲထူ ကြမ်းလဲကြမ်း…ခွေးလျှာကြီးလို မာမာကြီးနဲ့ အသားနု နေရာလေးတွေကို ထိုးရက်ပေးလိုက်တာ ဆိုတော့ ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်း တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ ဆောက်တည်ရာ မရ..။
“အင်း…ရှီး….ဖယ် ဖယ်….အို…ထွက်..ထွက်..ရှီး…အား ထွက်ကုန်ပြီ….“
သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်လာပေမဲ့ ကုလားက မရှောင်..လွှဲတဲ့အပြင် ပန်းထွက်လာတဲ့ အရည်တွေကို နွားနို့များ မှတ်နေသလားမသိ …ရှလူးခနဲ မော့စုတ်ပစ်လိုက်သေးတယ်…။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရှက်လဲ ရှက်…အားလဲနာသွားမိတယ်..။ အင်မတန် ချစ်လှပါချည်ရဲ့ ကြိုက်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ ဦးထွဋ်ကျော်တောင် ဒီလို ပေးဆပ်ခဲ့တာ မဟုတ်..။ ငရဲ ကြီးမှာ မကြောက်၊ ဘုန်းနိမ့်မှာ မကြောက် ….သူမို့လို့ကွယ်…..။
ကုလားက ပုဆိုးနဲ့ ပါးစပ်မှာ ပေပွ နေတဲ့ အရည်တွေကို သုတ်လိုက်တယ်..။ မြန်လိုက်တဲ့ ကောင် ဘယ်အချိန်က ပုဆိုးချွတ်လိုက်သလဲတောင် မသိ။ ပေါင်ကြားမှာ နောက်တစ်ခါ မျက်နှာ အပ်ပြန်တယ်….။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း စကားမဆုံးလိုက်ရ။ ကုလားက လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ သူမ ပေါင်တံ ပြည့်ပြည့်ကြီးတွေကို ထပ်ရက် ပြန်တယ်..။ အရည်ကြည်တွေကလဲ….မုတ်ကောင်ကနေ မွေးလိုက်တဲ့ပုလဲဥ တွေလို စီရီပြီး လိမ့်ဆင်းလာနေတာကို ကုလားက လျှာနဲု့ သိမ်းပြီး ရက်ရင်း မြိုချလိုက်တယ်…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း တအင်းအင်းနဲ့ ငိုချင်စိတ် ပေါက်သွားအောင်ကို အသဲခိုက်သွားရတယ်…။ တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ငှက်ဖျားတက်နေသလို တုန်တုန်ရီရီ နဲ့..။ ကုလားက သူ့လက်ဝါးကြမ်းကြီးနဲ့ နေရာအနှံ့ လျှောက်ပွတ်တယ်..။
အောက်ကနေ တရွေ့ရွေ့ပွတ်သပ်ပြိး အပေါ်တက်လာတယ်..။ မစူတစူ ချက်ကလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ အသာထိုး ကလိလိုက်တော့ ဆရာမကြီး မနေနိုင်ရှာတော့..။ ကုလားဆံပင် ခွေလိပ်လိပ်တွေကို လှမ်းကိုင်မိလျက်သား…။တရှူးရှူး တဟင်းဟင်းနဲ့ ခေါင်းကို တွန်းထုတ် အတင်းစုကိုင်ထားတယ်..။ ဝင်းဝါတဲ့ ဝမ်းဗိုက်သားပေါ်ကို ကုလားမျက်နှာ အပ်မိမှပဲ လက်လွှတ်လိုက်တယ်…။
သိပ်ဆိုးတဲ့ကောင်။ အခွင့်အရေးရတုန်း ဒီဆရာမ ကိုယ်လုံးအိအိ ကြီးမှာ ငါ့လက်နဲ့မထိတဲ့ နေရာ။ ငါ့နှာခေါင်းနဲက မတွေ့တဲ့ နေရာ မရှိစေရဘူးလို့များ ကြုံဝါးထားသလား မသိဘူး…။ သူ့ပါးသိုင်းမွေးတွေကလဲ ယားလိုက်တာ…။ ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက်နဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့တော့မှ ကုလား အသာအယာ တက်ခွတယ်..။ သန်မာသော လက်မဲ ကြီး နှစ်ဖက်နဲ့ ပုခုံးနုအိအိ တွေကို တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ပြီး နှာခေါင်းကြိးနဲ့ လိုက်နမ်းနေပြန်သေးတယ်…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း မနေတတ်…ယားလွန်းလို့ မနမ်းမိအောင် ရှောင်တယ်၊ တိမ်းတယ်…မရ။ ဒီလောက် မလှုပ်နိုင်အောင် ချုပ်ထားကိုင်ထားတာ…ဒီပါးက တစ်ခါမဟုတ် တစ်ခါတော့ မိမှာပဲ..။
ဟော…မိပြီ။ ကုလားနှာခေါင်းကြီးက ဒေါ်သက်ထားဝင်းရဲ့ ပါးပြင်မို့မို့ကြီးကို ရွှတ်ခနဲ နေအောင် နမ်းမိသွားရတော့တယ်..။ တစ်ခါနမ်းပြီးတောလဲ ကုလားက မတော် မရပ်။ ရွှတ်ခနဲ လေးငါးချက်လောက်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကြီး ဖိနမ်းပစ်တာ..။ နှုတ်ခမ်းကိုတော့ မနမ်း ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ….ဟိုဟာလုပ်မလို ဒီဟာ ကိုင်မလိုနဲ့တို့ထိ ဆော့ကစားနေမှုက မထိတထိနဲ့ အပျိုမကြီးကို မရိုးမရွ ဖြစ်စေတာကတော့ မငြင်းနိုင်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်းရဲ့ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို ကိုင်ပြီး လီးကို လက်နဲ့ မကိုင်ပဲ လီးဒစ်ကြိးနဲ့ မိန်းမတန်ဆာ အဝကို အသာတေ့ ဖိသွင်းလိုက်တယ်..။
ဒစ်ဖူးပဲ သွင်းရသေးတယ်…။ ဆရာမ ကြီး မခံနိုင်ရှာ။ အပျိုကြီးဆိုတော့လဲ ခံစားရပေမပေါ့..။ မျက်နှာလေးကို ရှုံ့မဲ့ပြီး ခေါင်းတွေယမ်းခါသွားတယ်..။
ကုလား လူစိတ်ရှိပါတယ်။ ဒီလို နုနုရွရွ အပျိုမကြီးကို နွားလိုးသလို လိုးလို့ မရမှန်း သိပ်သိတာပေါ့။ စိတ်ကို အသာထိန်းရင်း ချော့သွင်း လေး သွင်းတယ်..။ လက်တွေကိုလဲ အငြိမ်မထား..။ဂါဝန်လေး ပေါ်ကနေ နို့အုံ မို့မို့ ကြီးတွေကို တရွရွ ပွတ်သပ်ပေးတယ်။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဖင်တွေကသာ အလုံးကြီးတာ..အပေါက်လေးကျတော့ သေးလိုက် ကျပ်လိုက်တာ လီးကို လိုးတယ်ဆိုရုံလေး မျှင်းမျှင်းလေးပေါ့..။ လိုးနေတာ နှစ်ယောက်လုံး အရသာ တွေ့လာပြီပေါ့။
ဒစ်ဖူးကျော်ကျော်လေးနဲ့တင် အရသာကို သိရပါတယ်..။ လေထဲမှာ ဒန်းစီးနေရသလိုပဲ..သိမ့်ခနဲ ညိမ့်ခနဲ…။ ကြပ်ကလဲ ကြပ် ၊ စီးကလဲ စီး…ဝေဒနာအရင်းခံတဲ့ ကာမစည်းစိမ်က အပျိုမကြိး တကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံးဖမ်းစားနေတာ ဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းကြိးစေ့ပြီး အသက်အောင့်ရင်း သိသိသာသာပဲ ဖင်ထွားကြီးတွေကို ကော့ကော့ ပေးမိတယ်…။ကုလား အထိအတွေ့မှာ ဆရာမ ဦးနှောက်တွေ အလုပ်မလုပ်တော့။ ဆင်ခြင်တုံ့တရားက ဖောဋ္ဌပ အာရုံမှာ ကပ်ငြိ နစ်ဝင်သွားတယ်။ တစ်ချက်မှာ နောက်ထပ်တစ်လက်မလောက် သာသာလေး ကုလားထပ်ဖိသွင်းတယ်..။
“အမေ့..သေပါပြီ..အား…အား အမလေး…ဖြေးဖြေး….ရှီး…အား နာလိုက်တာ…“
အသားတွေ ဇိုးဇိုး ဇတ်ဇတ် တုံလာအောင်အထိ ခံစားသွားရတယ်..။ ဒီလိုမျိုးကို အပျိုဖြစ်ကတည်းကတစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပဲကိုး…။ ကြပ်ကြပ်ကြီးနဲ့ စီးစီးပိုင်ပိုင်…။ ညနေကတင် ငါးအရှင်တွေကို တံစို့ထိုးပြီး မီးကင်နေသေးတယ်..။ အခုပဲ ပြန်ပြီး ဝဋ်လည်တော့တယ်..။ အရှင်လတ်လတ် တံစို့ထိုးခံရတဲ့ ငါးပြေမကြီးလို ဒေါ်သက်ထားဝင်း ခါရမ်းသွားတယ်..။ ကုလား လီးကို အသာလေး ပြန်ထုတ်ပြီး မကြမ်းမနုလေး လိုးလိုက်ပြန်တယ်…။
နတ်ပြည်ကို အရှင်လတ်လတ် ချက်ချင်းရောက်သွားသလို ခံစားရပြီး တဟင်းဟင်း ငြီးတွားသံလေးများ ထွက်လာတယ်…။ ကုလား ခါးသေးသေးလေးကို တအားဖက်တွယ်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကလဲ ဘေးကို အကားကြီး ကားထားတယ်..။ ကုလား အံကြိတ်ပြီး နောက်တစ်ချက် ထပ်အဆောင့်…..
ကုလားလီး တဝက်နဲ့တင် ဆရာမကြီး သုတ်ရည်တွေ နောက်တစ်ကြိမ် လွှတ်ခဲ့ကပြန်ပါတယ်….။
ရွှတ်ခနဲ ပါးလေးကို နမ်းပြီး ခဏနေဦးနော် ဟုဆိုကာ ကုလား ပင်လယ်ထဲ ပြေးဆင်းသွားတယ်..။ အို…..ဘာများသွားလုပ်တာပါလိမ့်…။ သိပ်လဲ စဉ်းစားမနေချင်…။ ကောင်းလိုက်တဲ့အရသာ …။ သူမကသာ သုတ်ရည် နှစ်ကြိမ်ထွက်ခဲ့ပြီးပြီ…။ ကုလားက တစ်ခါမှ ပြီးသေးဟန် မတူ…။
သိပ်မကြာလိုက်…။ လီးကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့ ပြန်လျှောက်လာတယ်…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း မကြည့်ရဲသေးဘူး…။ မျက်လုံးအစုံမှိတ်ပြီး…အမောဖြေနေတယ်…။
“အိပ်တော့မယ်လေ။ ဆရာမား ကောင်းသွားပြီ မို့လား….“
သြော်…လက်စသတ်တော့ သူကရေသွားဆေးတာကိုး…။ သူ့ဟာကြီးကလဲ ဟယ်….။လက်တစ်ထွာလောက်ကို ရှိမယ် ။ ရှည်လျား သွယ်ပြောင်းတဲ့ သူမလက်တစ်ထွာဆိုလျင် ရှစ်လက်မလောက်ကို ရှိမယ်ထင်ရတယ်…။ အနီးကပ် ကြည့်တော့မှ ပိုကြီးနေတာ သိသာတယ်…။ အကြောတွေကလဲ အပြိုင်းပြိုင်းနဲ့….ကြောက်စရာကြီး…..။
ကုလားက ဒေါ်သက်ထားဝင်းကို ယုယုယယ ပွေ့ပြီး ပွတ်သပ်ပေးတယ်…။
ညှို့ဓါတ်ပါတဲ့ အသံလွင်လွင်ကလေးနဲ့ ဆရာမ ပြန်ဖက်ထားတယ်…။
ဒီလိုဆိုတော့လဲ ဒေါ်သက်ထားဝင်း နှမျောသလိုလိုရယ်….အဆုံးတိုင် အထည့်ခံချင်မိတယ်…။
ကုလားက ပွေ့လိုက်တာပါပဲ..။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မထိန်းနိုင် ရှာ…။ ရွက်ဖျင်တဲထဲ သွားအိပ်မဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပျက်သွားတယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒေါ်သက်ထားဝင်းရဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို တအားဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း ဖိကပ် စုတ်နမ်းလိုက်တယ်…။
ရှည်လျားကော့ပြန်နေတဲ့ဆရာမ မျက်တောင်ကော့ကြီးတွေ မှေးစင်းသွားတယ်..။ လည်တိုင်ကလေးကို သိုင်းဖက်ပြီး သန်မာစွာ ဆွဲယူလိုက်တဲ့ ကုလားလက်အတွင်းမှာ ရုန်းမရ..။ နှုတ်ခမ်းချင်းက ဖိကပ်လျက်…။ ကုလားလျှာနွေးနွေးကြီးက ဆရာမလျှာ ပန်းနုရောင်လေးကို မြွေတစ်ကောင်လို ရစ်ပတ်လိုက်ရာ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အသဲနှလုံးတွေ ရော သွေးသားတွေရော ဗြောင်းဆန်သွားတယ်…။ အကြောအချဉ်တွေ စိမ့်တက်ကုန်ပြီ..။ ထွန့်ထွန့်လူးမတတ် ကောင်းလိုက်တဲ့ အနမ်း..။ ကုလားရဲ့ အနမ်းရေအလျင်မှာ ဗေဒါပွင့်မကြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကုလားကျောပြင်ကြီးကို ကျားသစ်မလေးတစ်ကောင်လို ပြန်လည် ခြစ်ကုတ် သိုင်းဖက်ပြီး တဖြတ်ဖြတ်ဖြင့် ကုလား လည်ပင်းကိုပါ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးများနှင့် နမ်းစုတ်လိုက်တော့တယ်..။
မောဟိုက်သံကြီးနဲ့ အနားကပ်ရင်း တိုးတိုးပြောလိုက်တဲ့ ကုလားကြောင့် ဆရာမ တိုနံ့နံ့ ဂါဝန်လေးကို ချွတ်လိုက်တယ်..။
ငိုမဲ့မဲ့လေး ပြန်ပြောနေတဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ပါးပြင်လေးပေါ် ကုလားနှာခေါင်း နှစ်ထားရင်း…
“မရှက်ပါနဲ့…ဆရာမားရဲ့…ဒီကျွန်းပေါ်မှာ ဆရာမားနဲ့ကျုပ် နှစ်ယောက်ထဲပဲ ရှိတာ… ကျုပ်တောင် မရှက်လို့ မနေ့တုန်းက ဆရာမားဖင်တွေကို မှန်းပြီး တစ်ချီ ထုလိုက်သေးတယ်..“
ကုလားက တစ်တစ်ခွခွ ပြောနေပေမဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်း စိတ်မဆိုးမိ…။ အို…..သူက အရမ်း ပွင့်လင်းတာပဲ….။ ဒါပေမဲ့ …ပြန်မပြောရဲရှာ…နှုတ်ကမရဲသေး…။ စိတ်ထဲ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ တင် အရှက်သည်းစရာ….။
“ဆရာမားရယ်….လိုးတယ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်လုံး ကောင်းဖို့ပဲဟာ…“
“အို….အခု သူက ကောင်းလို့လား….“
“ကောင်းတော့ မကောင်းသေးဘူး…ဆရာမား မရှက်မှ ကောင်းမှာ….“
“ အိုကွာ…ဒီမှာ သူ့စိတ်ကြိုက် ပေးနေတဲ့ဟာပဲ…“
“ပါးစပ်က ပြောတာကို ကြားချင်တာပေါ့…“
“ခံ….ခံချင်နေပါပြီ….သူရယ်…သူ့မြင်းလီးကြီးနဲ့ လိုးတာကို ဒီက ခံချင်လှပါပြီ ရှင်ရဲ့….ကဲ…သိပြီလား….ဟွန်း….“
ပျားရည် အညွန့်အဖူးလေးတွေ စုစည်းထားတဲ့ ပျားလဘို့ကြီးလို ကိုက်ဆွဲစားပစ်ချင်စရာ ကောင်းလှတဲ့ ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်းကို ကုလားအရမ်း အကြိုက်တွေ့သွားတယ်…။
လာဟုဆိုကာ ကုလားက ခြေဆင်းထားကာ ကိုယ်ကို တစ်ဆစ်ချိုးထိုင်ပြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကို တက်ခွစေတယ်…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရှက်သွေးများ နီရဲလာတဲ့ အထိ ဒီပုံစံက ပွင့်လင်းလွန်းလှတယ်…။
ဒစ်ဖူးကြီးကို အသာအယာ တေ့ပြီး ကုလားက ဖင်ကားကြီးတွေကို တအားညှစ်တယ်…။ အို….စွင့်ကားဖူးမောက်နေတဲ့ တင်ထွားကြီးတွေလဲ သူ့လက်ကြမ်းကြီးတွေအောက်မှာ ကြေမွကုန်ပြီ ထင်ပါရဲ့…။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကုလားပုခုံးပေါ် မေးတင်ရင်း အသာလေး မှေးပြီး လိုးပေးနေတယ်…။ ရှေ့တိုးနောက်ငင် သိပ်လဲ မသွင်းရဲ ..။ ကုလား အဆိုအရ မြင်းစီးတာပေါ့…။ အနှေးစီးပဲ ခေါ်မလား… အလှစီးပဲ သမုတ်မလား ။ ဒီထက်တော့ မကြမ်းရဲ…အခုတောင် သေမတတ် ကြပ်တာ…။
ကုလားက နားမလည်ဟန်ဖြင့် အရက်ပုလင်း အဖုံးဖွင့်ပြီး တစ်ငုံ ငုံလိုက်တယ်..။
“အား…..ပူဆင်းသွားတာပဲ…ငါးကင်တစ်ကောင် ဖွက်ထားသေးတယ် မဟုတ်လား..“
“အို….ခစ်ခစ်…ငါးကင်က ကုန်သွားပါပြီ…. အမြည်းက ..ဒီမှာလေ…..“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ခေါင်းငုံ့ပြီး သူမနို့အုံထွားထွားတွေကို မေးဆတ်ပြတယ်…။ ငနဲသား အံ့သြပြီး မျက်လုံးကြီး ပြူးကြည့်တယ်….ဆရာမ မျက်နှာကိုလဲ ငေးတယ်…။ အမှန်က သူအတင်း မုဒိန်းတက်ကျင့်လို့သာ ဒီအမျိုးသမီးကို လိုးခွင့်ရတာ…။ ဒါ…အမှန်ပဲ…။အဲ…..။
“အို….ဘာကြည့်နေတာလဲ….အမြည်းမှ မရှိတော့တာ..အရက်သောက်ပြီး …သက်….သက်ထား ချိုချို နဲ့ မြည်းပေါ့…သွား…ရှက်လာပြီ…“
ပြောအပြီး ရှက်လွန်းလာတဲ့ အပျိုမကြီး ကုလားခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ရင်ဘတ်မှာ အပ်ပေးလိုက်တယ်…။ ဘာပြောကောင်းမလဲ ကုလားကိုင်ဆုတ်ထားတဲ့ ဖင်သားကြီးတွေကို လွှတ်ချပြီး ခါးလေးကနေ သိမ်းဖက်လို့ နို့အုံကြီးတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း စို့ပါလေရော….။ ဒီလိုကျတော့လဲ နို့မလှမှာတွေ၊ ရင်သားတွေ တွဲကျမှာတွေ အပျိုမကြီး ဂရုမစိုက်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့…။ ငါးဖယ်ပျံသလို ကော့ပျံနေတာပဲ…။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း စို့ပေးနေတဲ့ ကုလား ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်…တအင်းအင်း ငြီးလိုက် …အပေါ်ကနေပြီးတော့လဲ ရှေ့တိုးနောက်ငင်နဲ့ လိုးပေးလိုက်နဲ့ ဗျာများနေရှာပါတော့တယ်…။
ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းပြောရရင် ဒီပုံစံက လီးအဝင် တိမ်တယ်…။ ဖိုနဲ့မ အထိအတွေ့ကြောင့်သာ ကောင်းတာ….လီးက သိပ်လိုးနိုင်လွန်းတာ မဟုတ်…။ အဲ…ဒါပေမဲ့ဆရာမကတော့ အားမနာပါးမနာပဲ ကုလားခေါင်းကို ကိုင်ပြီး အတင်း ခွလိုးနေတော့တာပါပဲ…။
အံကလေး ကြိတ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ မိုးသက်မုန်တိုင်းကြားမှာ မျောပါနေတဲ့ ဗေဒါပင် တွေလို သွက်သွက်ခါ နေတဲ့ နိုးသားကြီး နှစ်လုံးကိုပင် အားမနာနိုင်တော့ပဲ ဆရာမ တစ်ယောက် အကြိုက်တွေ့ ဖျတ်ဖျတ်ခါနေတယ်…။ ကုလားလဲ နို့ကြီးတွေကို လွှတ်ချပြီး အောက်ကနေ အလိုက်သင့်လေး ထိန်းကိုင်ထားရတယ်…။ ဇောင်းထဲက လွတ်လာတဲ့ မြင်းမလေးတစ်ကောင်လို ဆံနွယ်ရှည်ရှည်တွေက ဖွားခနဲ ဖွားခနဲ လွင့်ပျံ ဝဲတက်လာပြီးနောက် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ… တတိယအကြိမ် သုတ်လွှတ်ပြန်တယ်..။
ချွေးကလေးတွေ နဖူးမှာစို့နေပြီး မောဟိုက်သံလေးနဲ့ တီးတိုးပြောရှာတယ်…။
“သူ..မကောင်းသေးရင် ပြောလေ…။ သက်ထားကို သင်ပေးပေါ့…“
“ဒါဖြင့်လဲ ဆရာမား ဖင်ကြီး တွေကို အားရပါးရ ညှစ်ပြီး ဆောင့်မယ်…“
ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် တလုံးတခဲ ကြီး သူ့စကားက…။ ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်တယ်…။ ဘယ်ကောင် မဆို ဒီလောက်တောင့်တင်း မောက် ထွားလှတဲ့ ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဖင်အိုးကြီးတွေကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပြီး မီးကုန်ရမ်းကုန် လိုးချင်ကြမှာ အမှန်ပဲလေ…။ ဒါကို ဒေါ်သက်ထားဝင်း နားလည်မိပါရဲ့..။ ခုလဲ ကုလား လိုချင်တာ မလွန်…။
ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ အရပ် ။လွတ်ချင်တိုင်း လွတ်လပ်..။ဖြစ်ချင်တိုင်း ကဲနေကြတယ်..။ ကုလားကလဲ အပျိုတင်းပြည့်မကြီးကို လီးအရသာ စွဲလန်းသွားအောင် ကြိုးစားချင်သလို ဆရာမကလဲ အပေးကောင်းလွန်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရယ်လို့ မေ့မရနိုင်အောင် စွဲလန်းသွားစေရန် ကုလားကို ကြွေးပါတေတယ်..။
ဆရာမ တောင့်တာတော့ သိတယ်..။ ဒီလောက်ထိအောင်တော့ ထွားမယ်လို့မထင်ထား..။ လေးဘက်ကုန်းလိုက်မှ ဖင်ဆုံကြီးက ထွားထွားမောက်မောက်ကြီးမှန်း ပိုသိသာလာတယ်..။ ကုလား ဆရာမရဲ့ အရေတွေနဲ့ ရွှန်းရွှန်းဝေနေတဲ့ ပန်းဖူးကြီး အဝမှာ လီးဒစ်ကြီးကို တေ့လိုက်တယ်…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ခါးလေးခွက်ပေးထားရင်း အဖုတ်ဝမှာ လှမ်းတေ့သွင်းနေတဲ့ လီးမည်းကြီးကို စူးလဲ့လဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ လည်ပြန်ကြည့်တယ်…။
ကုလား ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဖြုတ်တော့မယ်မှန်း သိတယ်..။ မတားချင်တော့…။
လီးတစ်ဝက်ကျော်လောက်ကို တဆက်ထဲ သွင်းလိုက်တဲ့ဒဏ်ကို ခဏသာ ခံရတယ်…။ လီးကြီးက တစ်ဆို့ပြီး ဝင်လာတာ..။ အရည်ကြည်လေးတွေကြောင့်မို့သာပေါ့..။ နို့မို့ဆို မလွယ်..ဘူး…။ အဲ…ခဏပါပဲ ..ချက်ချင်းသက်သာသွားတယ်..။ သုံးလေးခါ အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးပြီဆိုတော့ ဖင်ကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့ နောက်ထပ်အသွင်းကို မျှော်လင့်မိတယ်…။
လီးဟာ တစ်လက်မ မကျန်ပဲ အကုန်ဝင်သွားပြီ..။ ခံရသူမှာတော့ ဝေဒနာရော အရသာရော တပြိုင်တည်း ခံစားနေရတယ်…။ ကွဲပြဲမသွားပေမဲ့ အရမ်းဆို့ကြပ်ထစ်နေသလို ခံစားရတယ်..။ ကုလားရဲ့ အမွေးတွေ ဖင်ဆုံအိအိကြီးမှာ လာကပ်နေလို့သာ လီးဆုံးသွားမှန်း သိရတာ..။နို့မို့ ဒီလောက်ရှည်တဲ့လီးကြီး လိုးသွင်းတာ ညင်သာလွန်းလို့ ဝင်လို့ဝင်မှန်းတောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ်…။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ပါးစပ်ကလေးဟပြီး အသက်ကို မျှင်းရှုနေတယ်…။ မတွေ့ဘူးတော့ အတွေ့ထူးဆိုတာလို ဒေါ်သက်ထားဝင်း တစ်ယောက် ကုလား သူ့လီးကြီးကို ဆွဲနှုတ်သွားမှာကိုတောင် မကြိုက်ချင်တော့..။ အဖုတ်ကြွက်သားတွေနဲ့ တအားညှစ်ပြီး အထဲကို ဆွဲသွင်း သိမ်းထားလေရဲ့…။
ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ သံကြီးနဲ့ ကုလားပြောတယ်..။
အိုး…ကောင်းလိုက်တာ…နော်.။ တအားဆွဲထုတ်ပြီး တအားဆောင့်ထည့်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်သားဆိုတာ မီးပွင့်မတတ် အရသာတွေ့သွားတယ်..။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မလွှတ်ချင်ကြတော့ဘူး…။ ကုလား ဒေါ်သက်ထားဝင်း ပါးပြင်မှာ နှာခေါင်းနှစ်ထားရင်း မောဟိုက်သံကြီးနဲ့ ပြောတယ်..။
“ကောင်းတယ် ဆရာမားရယ်…အပေးကောင်းလွန်းလို့ မညှာတော့ဘူး ဆရာမားရယ်…နော်…“
အပျိုတင်းပြည့်မကြီး ရင်ဖိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာ ခေါင်းလေးငြိမ့်ပြလိုက်တယ်..။ ကုလားကလဲ နောက်ပိုင်းမှာ မညှာတော့…လုံးဝပဲ..။ မျက်လုံးကိုစုံမှိတ် အံကြီးကြိတ်ပြီး ဆရာမ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးကို လက်နဲ့ မက်မက်စက်စက် ဆုတ်ညှစ်ပြီး ဆောင့်လိုးနေတယ်..။`
လီးရှည်မျောမျောကြီးက တစ်ချက် တစ်ချက်မှာ သွားပြီး သားအိမ်ကို ထိတယ်ထင်ပါရဲ့..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း လူးလိမ့် အော်ဟစ်မိတယ်…။ ကျွန်းလေးပေါ်မှာတော့ လီးဝင်သံထွက်သံ..။ လီးခုံအရင်းနဲ့ ဖင်ဆုံကြီး ရိုက်မိတဲ့အသံ.။ ကုလားရဲ့ မာန်သွင်းသံ၊ ဆရာမရဲ့ အားမလိုအားမရ အော်ငြီးသံတွေနဲ့ ဆူညံနေတော့တယ်..။ နှစ်ယောက်စလုံး လောကကို မေ့နေကြတယ်..။
“အင့်အင့်…..မောင်….ကောင်းလိုက်တာ….ဆောင့်…ဆောင့်….သက်ထားကို မညှာနဲ့…အရမ်းကောင်းတယ် မောင်ရယ်……အား လိုး လိုး…“
ကုလားမှသူ…..သူမှ မောင်….၊ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကအစ ပြောင်းလဲကုန်ပြီ….။ ဆရာမရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့ သဘော..ဆုပေးတဲ့ သဘော…ပါးလေးကို ခပ်ဖိဖိကလေး နမ်းရှိုက်ပစ်လိုက်တယ်…။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း မိန်းမသား ပီပီ သာယာမိတယ်..။ ရှက်ပြုံးကလေး ပြန်ပြုံးရင်း လီးထွားကြီးရဲ့ အလိုးကို ကျေနပ်နှစ်သက်နေရှာတယ်..။
သောင်ပြင်မှာ လိမ့်ခါနေတဲ့ အပျိုမကြီး ဒူးခေါင်းမှာ သဲစသဲနလေးတွေ ကပ်ငြိပြီး အရေပြားကလေးများ စပ်ကျိန်းလာတာတောင် သတိမထားနိုင်တော့ပဲ အားရှိပါးရှိကြီး ကော့ကော့ဆောင့်တင်ပေးနေတယ်…။ ဖင်ကားကြီးတွေ ပြိုချင်လဲ….ပြိုပါစေတော့…။
“အိုး……ကောင်းလိုက်တာ..မောင်ရယ်….မောင့်ကို သက်ထား သိပ်ချစ်သွားရပြီ…..မောင်ရဲ့….လိုး….လိုး….အား…..အင့်..“
အဆင့်ချင်း ကွာလှတဲ့ ကုလားခမျာ အပေးကောင်းလွန်းလှတဲ့ ဒေါ်သက်ထားဝင်းကို အစွဲကြီး စွဲမိသွားတယ်…။ အဲသလိုပါပဲ…ဒေါ်သက်ထားဝင်းကိုယ်တိုင်လဲ ဂုဏ်တွေ မာန်မာနတွေ အရှက်တရားတွေ အကုန်လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး ကုလားကို စိတ်ရှိတိုင်း အစပ်ယှက် ခံရတဲ့အထိ အသဲခိုက်မိပါပြီ…။
“အား….ဆောင့်….ဆောင့်..အိုး……မောင်….ရေ…သက်ထား ပြီးပြီ ….ပြီး….အီး….အစ်…အစ်…“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ပဲ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ်နဲ့ ကော့ကော့ပြီး သုတ်ရေတွေကို ပန်းထုတ်တဲ့ အချိန်မှာ ကုလားကလဲ သုတ်လွှတ်ချိန်နဲ့ သွားဆုံလိုက်တာ ဘာပြောကောင်းမလဲ…. ကုလား ဒေါ်သက်ထားဝင်းကို အရိုးတွေ ကြေကျိုးသွားမတတ် ဖက်တွယ်ပြီး ကာမအထွဋ်အထိပ် ကို လျှောက်လှမ်းရောက်ရှိသွားတော့တယ်…။
ဒေါ်သက်ထားဝင်း တစ်ယောက်မှာတော့ သူမရဲ့ ကာမသိုက်နန်း ဝတ်ရည်ချိုအိုးကြီးကို ဖွင့်လှစ်သွားတဲ့ ကုလားရဲ့ အမွှေးဗရဗျစ်နဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးအောက်မှာ လူးလွန့်ရင်း မိန်းမော သာယာနေမိတယ်…။
“ထဦး..ကွာ..ဒီမှာနုံးပြီး မောလှပြီ…တဲထဲမှာ သွားအပ်ရအောင်…နော်…“
ငြူစူသလို မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး ကုလားခါးကိုဖက်ဆွဲဖက်ရင်း တဲထဲလှမ်းဝင်ခဲ့သည်…။
“ခုနက ..ဘယ်လို ခေါ်…“
“သိပ်ဆိုး တဲ့ လူ…….“
“မနက် ကျရင် ခေါ်မလား…“
တကယ်စကားများတဲ့ ကုလား ….ဟွန်း အရမ်းဆိုးတယ်…။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ရှက်နွဲ့နွဲ့ကလေး တွေးရင်း ကုလားရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်လိုက်ကာ ဇိမ်ယူရင်း အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်….။
ညကလဲ တစ်ညလုံးနီပါးပဲ နှစ်ပါးသွားခဲ့ကြတာ မနက်ရောက်တော့ မလှုပ်ချင် မရှားချင်..ဖြစ်နေရတဲ့အထဲ သူကတမှောင့်…။
“ဘာလဲ….ဘာလဲ….ဒီမှာ သူ့ကြောင့် ..တညလုံး အိပ်ပျက်ထားရတဲ့ဟာ….ကို…“
“မဟုတ်ဘူး…ဆရာမားရဲ့….ထ..ထ…ဟိုမှာ ကယ်မဲ့သူတွေ လာနေတယ်…“
ချက်ချင်းပဲ ကုလား ပြန်ပြေးထွက်သွားတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း အားတင်းပြီး ကပျာကယာနဲ့ပဲ အဝတ်အစားတွေ ကောက်ဝတ်ပြီး အပြင်ထွက်ကာ ကျောက်ဆောင်ပေါ် လှမ်းတက်လိုက်တယ်…။
မှုန်ပျပျကလေး…အဆုံးအစမဲ့ ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ ရေးတေးတေး အမဲစက်ကလေး တရွေ့ရွေ့…..။
“ဟား….ဟုတ်တယ်..။ မော်တော်…မော်တော်..ကယ်မဲ့သူတွေ လာပြီ..ငါတို့ မသေတော့ဘူး….ဟေး….“
ဒေါ်သက်ထားဝင်း ဝမ်းသာအားရ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ဖြစ်နေတယ်..။ ကုလားကလဲ စွပ်ကျယ် အလံကြီး ဝှေ့ရမ်းလို့…။
“ဟေး ငါတို့ ဒီမှာ…ဟေး…..ကျွန်မတို့…….“
မော်တော်ဆီကနေ ခဏကြာတော့မှ အချက်ပြမီးရောင်လေး လက်ခနဲ ပြလာတယ်..။
ချက်ချင်းပဲ ဝေးရာကနေနီး….။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သဲကွဲလာပြီ…။ မော်တော်တစီးလုံး မြင်နေရပြီ..။ ကျောက်ခဲရေပေါ် ..ကံကောင်းလွန်းတဲ့ အဖြစ်မို့ နှစ်ဦးစလုံး ခွန်အားသစ်တွေ တိုးပြီး ပျော်မြူးရွှင်ပျ နေကြတယ်..။
အဲဒါပါပဲ…နောက်ဆုံးတော့ …ပင်လယ်ဖျံ…ဆိုတဲ့ မော်တော်နစ်တဲ့သတင်းကို ကြားပြီး ပင်လယ်ထဲမှာ ရှင်လိုရှင်ငြား လိုက်ကယ်နေတဲ့ လူတွေကို တွေ့ရပြီး ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်းရော၊ ကွမ်းယာသည် ကုလားရော လုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့ ရန်ကုန်ပြန်ခရီးကို ဘေးကင်းရန်ကင်း လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါပြီ…။
ဒီလိုနဲ့ ဇာတ်သိမ်းလိုက်ရင် ကုလားကို ခိုက်နေတဲ့ ၊ အပျိုမကြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်းကို ကြိုက်နေတဲ့ ကိုဖရာရွှတ် တစ်ယောက် ဘဝင်ကျနိုင်မလား….ဗျ…။ ဟီး..ဟီး စတာပါဗျာ….ကိုရွှေကုလား ရဲ့ အလိုကျ ဆိုပြီးတော့တောင် နာမည်ပြောင်းချင်စရာ..။ နောက်ပိုင်း လေးတွေက…..။ ကဲ…ဆွဲပြီဗျာ….။
ရန်ကုန် ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီ…။ ရွက်ဆုတ် ကလေးတွေတောင် ဆုတ်ဖြဲပစ်ခဲ့ရတာ အရွက် ခြောက်ဆယ် ပြည့်ခဲ့ပြီ..။ နှစ်လတိတိ…..။
ကုလားတစ်ကောင် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း တွေးနေမိတယ်…။ သူ့ရှေ့နားမှ သူနားခိုခဲ့တဲ့ တိုက်အိမ်ကြီး၊ နှစ်ထပ်အိမ်ကြီး ….။ ခုတော့ ပြောင်တလင်းခါလို့…။ ဟင်းလင်းပြင် ဖြစ်နေပြီ…။ တိုက်အိမ်ကြီးအစား ဆောက်လုပ်ရေး ဝင်းကြီး ခတ်ထားသည်..။ တစ်ခါက ဒီနေရာမှာ အိမ်တစ်လုံးရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ဆိုတာ ကျိမ်တွယ်ပြောရမလို…။
ကုလား ဦးလေးနဲ့ အိမ်ရှင် အဖိုးကြီးက ရွာတုန်းကထဲက ရပ်ဆွေရပ်မျိုး။ အခုတော့ အဖိုးကြီးကလဲ သူ့ဇာတိမှာပဲ ခေါင်းချတော့မယ်ဆိုပြီး ရွာပြန်သွားခဲ့ပြီ…။
ကယ်ဆယ်ရေးမော်တော် လာတုန်းက ကုလား ရန်ကုန် ပြန်မလိုက်ပဲ သူ့ချက်မြှုပ် ၀ါးတော..ရွာကို ပြန်သွားခဲ့တယ်..။ ဦးလေးဈာပန ကိုတော့မမှီ..။ ဒါပေမဲ့ ရွာက ယူစရာရှိတာလေးတွေယူပြီးမှ ရန်ကုန် ပြန်တက်လာခဲ့တယ်…။ ခုဆို နှစ်လတင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပြီ..။ ရန်ကုန်မှာက ရှာရလွယ်သလို အကုန်ကလဲ လွယ်တယ်..။ လူတစ်ကိုယ်စာ ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်..။
ပိုဆိုးတာက ကုလားအသိ အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးကလဲ ငွေစကလေးနဲနဲ ပိုက်ပြီး တောပြန်ခေါင်းချတာဆိုတော့ ကုလားတစ်ယောက် လိပ် ပက်လက်လှန်ထားသလိုပဲ ယက်ကန်ယက်ကန်….။
ဟူး……ကုလား သက်ပြင်းမောမောများကို မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်…။ ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်းကတော့ လာကယ်ခဲ့တဲ့ မော်တော်နဲ့ပဲ ရန်ကုန် ကိုပြန်လိုက်သွားခဲ့တယ်..။ အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးကပြောတာတော့….သူ့အမျိုးသား ဦးထွဋ်ကျော်ဆိုတဲ့ ငတိကြီးနဲ့လဲ အကြီးအကျယ် စကားများရန်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့…၊ ရန်ပွဲက တော်တော်ဆူသွားတာဆိုပဲ…။ သူနဲ့များ ဆိုင်နေမလား တွေးရင်းနဲ့ ကုလား စိတ်လှုပ်ရှားလာမိတယ်…။
ထိုင်နေရာကနေ လေးတုန့်လေးကန်ထပြီး ဆောက်လုပ်စ ကန်ထရိုက်ဝင်းကြီးကို နောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ ငေးကြည့်လိုက်မိတယ်…။
“ဟေ….ဘာလဲကွ..ပိုက်ဆံလား….ဆောရီးကွာ ငါလဲ ခွေးဖြစ်နေတယ်…“
“အာ….ဦးလေးကလဲ ရုပ်ကိုသေချာကြည့်ပါဗျ…။ ဒီမှာ ကားပေါ်က ဘဲကြီးတစ်ယောက်က ဒါလေးပေးခိုင်းလိုက်လို့ဗျ..“
ချာတိတ်လေး ယူလာပေးတဲ့စာကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ စာရယ်လို့လဲ မပါ..။ လိပ်စာကဒ်ကလေးတစ်ခု…။ …….ကွန်ဒို၊အပေါ်ဆုံးအလွှာ ………အကျိုးဆောင်ကုမ်မနီတဲ့..။ ဘာသဘောလဲ…။ ပွဲစားတွေလား…။ ငါကားမောင်းချင်လို့ ကားမောင်းအလုပ်လိုက်ရှာနေတာကို သိသွားလို့ပဲလား..။ အိုကွာ…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိုကေတာပဲ..ငါ့မှာ စဘော်တင်နိုင်သားပဲ..။ အိပ်စရာ နေရာကလေးလဲ ရမယ်..တစ်လ နှစ်သောင်းလောက်လဲ ရမယ်ဆိုရင် မောင်းပျော်ပါတယ်…ဟုတွေးရင်း ကျဆင်းနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို ပြန်တည်ဆောက်မိလို့ စွပ်ကျယ်အစုတ်၊ အရောင်မရှိတော့တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကလေးနဲ့ ခပ်နွမ်းနွမ်း ကျောပိုးအိပ်ကလေးကို လွယ်ကာ အလုပ်လက်မဲ့ ကုလားတစ်ကောင်တော့ ခြေဦးတည့်ရာ…ဆီ သို့………။
လူခေါ်ဘဲကို တီးပြီး အတော်ကြာတဲ့အချိန်ထိ အိမ်ရှင်က ထွက်မလာ…။ ခဏရှိမှ ..ကျွိ…ခနဲ တံခါးပွင့်လာတယ်…။“အို……““ဟာ….“ အကြီးအကျယ် အံ့သြနေကြတဲ့ လူသားနှစ်ဦး…..။ စကားပင် မဟနိုင်ကြ…။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အခုမှ စမြင်ဖူးတွေ့ဖူးတဲ့ လူတွေအလား မျက်တောင်မခတ်တမ်း စိုက်ကြည့်နေမိကြတယ်…။ အကြာကြီးပဲ….။ ပထမဆုံး သတိဝင်လာတာက ကုလား….ခြေထောက်လေး ရှေ့နဲနဲ တိုးပြီး အခန်းထဲ လှမ်းဝင်လိုက်တယ်…။ အရောင်တောက်တောက် ပေါလစ်တွေက မျက်လုံးပင် ကျိန်းစပ်သွားမတတ်..။ သားနားထည်ဝါလှသော အခန်းအပြင်အဆင်ကို ကုလားစိတ်မဝင်စားမိ….။ သူစိတ်ဝင်စားတာက ..သူ့ရှေ့က အမျိုးသမီး…။ အမျိုးသမီးက အတော်ကို ဖွံ့တယ်..။ အောက်ပိုင်းကလဲ သိပ်တောင့်တယ်..။ အပေါ်ပိုင်းကတော့ ပြစ်မျိုးမှည့်မထင် အလှမျိုးကြီး…။ ခါးသေးလို့ ရင်ချီတဲ့ ရင်ထွားတင်ကားမကြီး….။ ပွဲနေပွဲထိုင် အဝတ်အစား တွေ ဆင်သထားတယ်…။ လက်တစ်ဖက်က ဟန်းဖုံးကို ကိုင်လို့ ကုလားကို စိုက်စိုက်ပါအောင် ကြည့်နေဆဲမှ လက်ထဲက ဖုန်းကို ဆိုဖာပေါ် ပစ်တင်လိုက်တယ်…။ ပြီးတော့ ကုလားပုခုံးကို သွယ်ပြောင်းတဲ့ လက်အစုံနဲ့ သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖိနမ်းလာတယ်…။“အရမ်း …ချစ်တဲ့ မောင်ရယ်….“နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ခွါခွါချင်းမှာ တုန်ရီလှိုက်မောစွာနဲ့ အမျိုးသမီးကြီးက ပြောတယ်..။ ရီဝေ မှေးစင်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းညိုကြီးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်ပြီး နောက်ထပ်တစ်ခါ သိုင်းဖက်ရင်း နမ်းပြန်တယ်..။ ဒီတစ်ခါတော့ အမျိုးသမီးက ကျူးကျော်စစ်ကို ဆင်နွဲလာတယ်..။ နမ်းရုံစုတ်ရုံတင်မကတော့ပဲ သူမလက်တွေက ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်..။ ပထမတော့ အထဲမှာ ဟိုပွတ်ဒီပွတ် လုပ်နေသေးတယ်…။ အဲ…ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာ ကုလား အနမ်းက ရမက်သည်းလွန်းတာမို့ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သွေးတွေဆူလာပြီး အထဲက ငပဲကြီးကို ဘောင်းဘီ အပြင် ကိုင်ထုတ်လိုက်တယ်…။“တံ……တံခါး…ဆရာမား….““ရတယ်… ရှေ့ခန်းမှာ လူမနေဘူး…“ပြန်လဲဖြေရင်း ကုလားရင်ဘတ်ဆီကနေ အမွှေးတွေကို လျှာဖျားကလေးနဲ့ မထိတထိ တို့လျက် တဖြည်းဖြည်း အောက်ကို လျောဆင်းသွားတယ်..။“အား………ရှီး…..အ .. ဆရာမား ရယ်…“ ကုလား တုန်တုန်ခိုက်ခိုက် ဖြစ်နေရပါတယ်..။ တစ်ကိုယ်လုံး အောက်ကို ဒူးတုပ်ထိုင်ချလိုက်ပေမဲ့ မျက်တောင်ကော့ကော့ကြီးတွေကို ပင့်တင်ပြီး တရှိုက်မက်မက်နဲ့ ကုလားမျက်နှာကို မော့ကြည့်တယ်…။ ပန်းဆီရောင် လျှာနုကလေးကို ထုတ်လိုက်ပြီး ချက်အောက်က အမွှေးတွေကို တို့ထိဆော့ကစားနေရင်း အဲဒီကနေ ဆီးခုံ၊ ပြီးတော့ ငပဲကြီး အနားမှာ ရစ်ဝဲရစ်ဝဲ လုပ်နေရာက နေ ဆတ်ခနဲ ဆို…….။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း အရှက်တရားတွေ၊ မာနဂုဏ်တွေကို ကုလားဆီမှာ ရမက်နဲ့ လဲပစ်လိုက်ပါပြီ…..။ ကုလားရဲ့ လီးကြီး ကို အသာဆွဲပြီး သူမရဲ့ လျှာ ပန်းရောင်လေးဖြင့် ဒစ်ကို ကွေ့ဝိုက်ပြီး ယက်နေပါတယ်…။ “အိုး….ဆရာမား……အာလာ……အား ..အစ် အမား….အာအအ…“ ကုလားခမျာ ငါးရှဉ့် ပြာသုတ်လိုက်သလို ဖျတ်ဖျတ်လူးနေရှာပါတယ်…။ ဘဝမှာ တစ်ခါမှ မခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့ အရသာကိုး …..။ အထက်တန်းစား မိန်းမတစ်ယောက်ကသူ့လီးကိုစုပ်ယူနေတာတွေ့ရတော့ အံ့သြသလို သွေးလဲ ကြီးသွားမိပါတယ်…။ အမျိုးသမီး ကတော့ ဘာမှ ဂရုမထားသလိုပဲ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတဲ့ လချောင်းကြိးကို မက်မက်စက်စက် စိုက်ကြည့်နေရင်း ဆုပ်ဆွဲပြီး ပါးစပ်ထဲ သွင်းနေတယ်…။ လီးကြီးကထွားလွန်းတော့ ဆရာမ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ပါးစပ်က ဝလုံးသဏ္ဍာန်သေးလွန်းနေလို့ အတော်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ သွင်းယူရပါတယ်…။ လည်ချောင်းမှာ လာထောက်နေတာတောင် အပြင်မှာ လက်တစ်ဆုပ်စာ ကျန်နေသေးတယ် လေ….။“အား……အိုး..ဆ..ဆရာမား…………အား…..“အပျိုမကြီး က စိတ်ထင်တိုင်းကျဲနေတော့ ကုလား မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် ကောင်းလာတယ်..။
“အား….အု….အ..ဆရာမား..ရှီး.အိုး ဖယ်…ဖယ်..ဖယ်တော့….“မဖယ်ပေးပါ…။ အမျိုးသမီးက မဖယ်ရှားတဲ့ အပြင် ကုလားခါးကိုပါ လက်အစုံနဲ့ အတင်းဆွဲဖက်ထားပြီး စုတ်ပေးတာ … နောက်ဆုံး ကုလား စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ အမျိုးသမီး ပါးစပ်နဲ့ အပြည့် သုတ်ရေတွေ ပန်းထုတ်ချလိုက်တယ်…။“အား…အင် ဟင်း…ကောင်းလိုက်တာ………ဆရာမား..ရယ်…“ကုလားခမျာ မောဟိုက်သံကြီးနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာတွေ ရေရွတ်နေဆဲမှာ ဒေါ်သက်ထားဝင်းက ..“ဂလု“ ခနဲ မြည်အောင်ပင် မြိုချလိုက်တယ်…။ အခန်းတံခါးကို အခုမှပဲ ပိတ်ဖို့ သတိရကြတယ်….။ကုလားကတော့ လီးကြီးတန်းလန်းနဲက အမောဖြေရင်း ဆရာမအလှကို ကသိုဏ်းရှုနေတယ်…။“မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ …..သွားမလို့..““အရေးကြီးလို့လား…“တစ်ခွန်းတည်းပြောတဲ့စကား..။ ထိရောက်လွန်းတယ်..။ ဒေါ်သက်ထားဝင်း နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေက မစူတစူ….မပြုံးတပြုံး….။ “ဦးထွဋ်ကျော်နဲ့က ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲ…““မေးမနေစမ်းပါနဲ့…..ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာ သုံးရက်လောက် အတူတူနေခဲ့တဲ့ မိန်းမကို ယုံရပါ့မလား..တဲ့….““ ဒါပေမဲ့ …မြတ်ပါတယ်…အောက်မှာ ရပ်ထားတဲ့ မတ်တူးကားလေး တွေ့လား..။ အဲဒါနဲ့ ငွေသား သိန်းနှစ်ရာ လေ…နစ်နာကြေးတော့ ရလိုက်တယ်…““ များလှချည်လား….““ များရမှာပေါ့…သူမပေးလို့..သက်ထားဖွလိုက်ရင် သူစောက်ရှက်ကွဲမှာလေ…ဥပဒေနဲ့လဲ ရင်ဆိုင်ရဦးမယ်လေ…““ ကျုပ်…ကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူး…..ဆရာမား ရယ်….““ဘာ….ကျုပ်လဲ……ဟွန်း…..“ဒေါ်သက်ထားဝင်း ငြူစူစူကလေး မျက်စောင်းထိုးရင်းနဲ့ လှမ်းဟောက်တယ်..။ ပြီးတော့ ….ဟာ….ဒေါ်သက်ထားဝင်း အရှက် ကင်းမဲ့သွားပြီ ထင့်…..။ ဝင့်ဝင့်ထည်ထည် ဝတ်ထားခဲ့တဲ့ ပါတိတ်ဝမ်းဆက်ကလေးကို ခွါချွတ်ချလိုက်တယ်..။ နောက်တလွှာ….. ထမိန်ကိုလဲ ကွင်းလုံး ချွတ်ချလိုက်တယ်…။ ပြီးမှ ယဉ်ယဉ်လေး ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ ဆံထုံးကြီးကိုပါ ဖွာချလိုက်တယ်..။တင်ပါးအထိ ရှည်လျားတဲ့ ဆံနွယ်စင်းစင်းတွေ…တခါခါနဲ့ မိန်းမလှကြီး….။ “သက်ထား ကိုယ်လုံးက သိန်းငါးရာ မတန်ဘူးလား…ဟင်..“ကုလား ငေးကန်းကန်းနဲ့ ပါးစပ်မဟနိုင်..။ နှုတ်က အားစေးမိထားသလို အ..နေရှာတယ်..။ သွေးတွေကတော့ ဆူဝေနေပြီး လီးကလဲ ဖြောင်းခနဲ ဖြောင်းခနဲ ဆရာမ သွေးကို သောက်ချင်လာမိတယ်…။“ကြောက်တောင် ကြောက်လာပြီ…..ဆရာမား …ရဲ့..““ဟွန်း….ဒါက ဘာကြောက်တာလဲ….““တော်ကြာ…ရဲတွေ ဘာတွေ…““အို…..မောင့်ကိုတော့ သက်ထား ကြည်ဖြူပါတယ်…““ဘာ ..ကြည်ဖြူတာလဲ…““အိုကွာ……သိရဲ့သားနဲ့…သွား.““တကယ်..မသိလို့ပါ…ဆရာမားရဲ့..““ဒါဖြင့်…ဒီနားလာ…ပြောပြမယ်…..“ဆရာမ ဒေါ်သက်ထားဝင်း ကုလားနားရွက်ကလေးနားကပ်ပြီး ရှက်ရွံ့ရင်ဖိုစွာ အသံတုန်တုန်ကလေးနဲ့ ပြောတယ်…။“မောင့်ကို……မောင့်ကိုလေ….သက်….သက်ထား ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ အလိုးခံမှာပါ….ရှင်ရဲ့…“ကဲ….ဘယ်နှယ့် နေသလဲ…..ကိုရွှေကုလား…….။
အကယ်ရွေ့သာ ……သင်သည် ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး သွေးသားဆူဖြိုးလှသော လုံးကြီးပေါက်လှ အပျိုတင်းပြည့် မိန်းမ လှလှ တစ်ဦးနဲ့ အခန်းတစ်ခုထဲတွင် နှစ်ဦးတည်း ချစ်တင်းနှောခွင့် ရမည်ဆိုပါက…….
သင် မည် ကဲ့ သို့ ရင် ဆိုင် မည် နည်း…..။
————×~~~~~~~~~~×——————- အခုလို ဇာတ်လမ်း ပြီးဆုံးတဲ့ တိုင်အောင် သည်းခံပြီး ဖတ်ရှု အားပေးသော ဘော်ဘော်မန်ဘာများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဗျာ..။ အားလုံးကို ခင်မင်စွာဖြင့်